၈၈ ရဲ့ နော်မန်: 6/26/11 - 7/3/11
“ဟေ့… အကြပ်လောင်း သင်တန်းကျောင်း ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ ရုပ်ရှင်ပြမယ်တဲ့ ဟေ့”
ဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့ ပျော်မြူးနေတဲ့ ညီမလေးရဲ့အခြေအနေမြင်ကွင်းက ကိုယ်တွေဆီကိုပါ စီးကူးစေ၏။ ကျနော်တို့ နေတဲ့ ရွာကလေးနဲ့ မနီးမဝေးမှာ အကြပ်လောင်း သင်တန်းကျောင်း၊ အမှတ် (၆) တပ်မတော် ပညာရေးကျောင်းနဲ့ အမှတ်(၂) သံချပ်ကာတပ် တို့အခြေပြု၏။ နေ့ထူးနေ့မြတ် (ဝါ) သင်တန်းဆင်းပွဲ ရှိတဲ့အခါမျိုးမှာ ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားကြီး တွေ ပြလေ့ရှိ၏။
အနီးဝန်းကျင်က ဒေသခံတွေကို တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ ဝင်ထွက်ကြည့်ရှုခွင့်အပြင် ဈေးရောင်းခွင့်ပါ ပေးတာမို့ စည်ကားပြီး အတော်လေးကို ပျော်စရာကောင်း၏။ ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ ဘယ်အိမ်ကိုပဲကြည့်လိုက် ကြည့်လိုက် ဘယ်သူ့ကိုပဲ ကြည့်လိုက် ကြည့်လိုက် ကိုယ်လုပ်စရာ ရှိတာလေးတွေကို မိုးမချုပ်မီ မြန်မြန်လေးလုပ်ကြ ရေမြန်မြန်ချိုး ထမင်းမြန်မြန်စားပြီး ရုပ်ရှင် ပြတဲ့နေရာကို ကြည့်ကြလေရဲ့။
ရုပ်ရှင်က ည (၈) နာရီလောက်မှ ပြလေ့ ရှိတာမို့ ရဲဘော်တွေ တပ်မိသားစုတွေနဲ့ ဒေသခံရွာသူရွာသားတွေ ဈေးတန်း လှည့်ပြီး ခံတွင်းတွေ့မယ် ထင်တဲ့ အစားအစာ တွေဝယ်ကြ ခြမ်းကြ စားသောက်ကြနဲ့ ဘယ်ဟာက စစ်သား ဘယ်ဟာ က အရပ်သား ဘယ်ဟာက တပ်မိသာစုဆိုပြီး ခွဲမရအောင် ရှိနေ၏။
တပ်နဲ့ပြည်သူ တသားတည်းရှိတဲ့မြင်ကွင်းဆိုတာ ဒါကို ဆိုတာထင်ပါတယ်။ အနာဂတ်ကို ကြိုတင်သိမြင်နိုင်တဲ့ ဥာဏ်နဲ့ မျက်လုံးသာရှိခဲ့ရင် အဲဒီနေ့က… အဲဒီနေရာကို ကျနော် သွားဖြစ်မယ်မထင်။
အကြောင်းကတော့ ကျနော့်ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက်တွေ ပြောင်းလဲစေခဲ့လို့ပေါ့။
ဖြစ်ချင်တာက အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်သွားတာက စစ်သား…။
ရုပ်ရှင်ကို တပ်မတော်နယ်လှည့် မော်ကွန်းရုပ်ရှင်အဖွဲ့က ပြတာမို့ နိုင်ငံတော်အလံနဲ့ နိုင်ငံတော် သီချင်းပြီးရင် “နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရန် သင့်အား တပ်မတော်မှ အလိုရှိသည်” ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာလေးကို ဦးစားပေးပြလေ့ ရှိတယ်။ အစဉ်အလာတွေပြီးဆုံးတော့ ဇာတ်ကားအမည်ထိုးချိ်န်မှာ လက်ခေါက်မှုတ်သံတွေ (ဟေး…..) လို့ အော်ဟစ်သံတွေ တခဲနဲ့ ထွက်ပေါ်လာ၏။
မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ရေးနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ဂုဏ်ကို မြင့်တက်စေတဲ့ ဝါဒဖြန့်ချိရေးကား “အမိမြေမှ သားကောင်းများ” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်၏။
ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ အနိဋ္ဌာရုံမြင်ကွင်းတွေပေါ့။ ကောင်းဆိုး ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ အရွယ်မဟုတ်လေတော့ တမြေထဲနေ တရေထဲသောက် ညီနောင်များပါလား ဆိုတဲ့ အသိကမရှိ သောင်းကျန်းသူဆိုပြီး မုန်းလိုက်တာ နာကျည်းလိုက်တာ ပြော မနေပါနဲ့တော့ဗျာ။
ရန်သူ့ဘက်က မိုင်းထိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျည်ဆံထိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တီးလိုက်ရတဲ့လက်ခုတ် မှုတ်လိုက်ရတဲ့ လက်ခေါက် လက်ဝါးတွေကြိမ်းစပ်ပြီး အာခေါင်တွေခြောက်လာတဲ့အထိ ပါပဲ။
စစ်သားတယောက် ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရသွားလို့ကတော့ ထွက်လိုက်တဲ့ ဒေါသ ပြောမပြ တတ်အောင်ပဲဗျာ။ ငယ်ရွယ်တက်ကြွပြီး သွေးဆူတတ်တာမို့ နာကျည်းစိတ်နဲ့အတူ အမှန်အမှားမသိတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်တွေ ရင်ထဲမှာ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်ပြီး တထိုင်တည်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တာက “ငါ စစ်တပ်ထဲ ဝင်မယ်” ဇာတ်ကားပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ထိုးလိုက်တဲ့ စာတမ်းလေးက ကြက်သီးတောင် ထတယ်ဗျာ။
“ငါ့သားများ စစ်ထဲ ဝင်ရင်လေ… သူ့ကို ပြောလိုက်ပါ၊ စစ်တပ် ဆိုတာ အမှန်တကယ်သာ လိုက်နာ နိုင်မယ်ဆိုရင် ယောက်ကျားကောင်း ယောက်ကျား မြတ်တွ မွေးထုတ်ရာ ကျောင်းတော် ကြီးပေါ့ ”
စာပိုဒ်အဆုံးမှာ ယောက်ကျား ကောင်း ယောက်ကျားမြတ် ဖြစ်ဖို့ စစ်ထဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ သံဓိဋ္ဌာန်စိတ်က ငယ်ထိပ်ကို တက်ဆောင့်လေ၏၊
“အဖေ.. သား တပ်ထဲဝင်မယ် အဖေ” လို့ ပြောလိုက်တော့ အံ့သြမှင်သက်တဲ့ မျက်လုံးနဲ့ စိုက်ကြည့်ပြီး
“အေးလေ..ဒါဆိုလည်း မတိုက်တွန်းသလို မတားမြစ်တော့ပါဘူးကွာ။ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို အကောင်းဆုံးနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့် လျှောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားပေါ့ကွာ.. အခြေအနေ အချိန်အခါရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဖြစ်ထွန်းပေါ် ပေါက်လာတဲ့ ဘယ်အရာမဆို တန်ဖိုးရှိတယ်ကွ။
မူလရှိရင်းစွဲ တန်ဖိုးထက် ပိုလာအောင် (ဝါ) ကျဆင်းဆုတ်ယုတ် သွားအောင် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အင်အားစုမှတပါး တခြားမရှိဘူး ဆိုတာ နားလည်ထားပေါ့ကွာ”
“အေးလေ …..အခု မင်းသဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြဖို့ ခက်သားကွ.. လောကမှာ ဘယ်အရာမဆို တစုံ တခုအတွက်တော့ ကောင်းကျိုးပြုတာချည်းပဲ။ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တခုကို ရွေးချယ်လျာထားပြီးတဲ့နောက်မှာ အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိတိကျကျ ရေရေရာရာ သိအောင်ကြိုးစားပေါ့ တချိန်မှာ ထပ်တူကျတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကြုံလာရရင် ရှင်းသွားမှာပါကွာ” ဆိုပြီး ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ဘဲ ဆေးလိပ်ကိုဖွာရင်း တခြားနေရာကို ငေးနေလေရဲ့။
ဘာလဲ… ဘာလဲ… ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့လည်းမရ မေးတော့လည်း မဖြေတာမို့ ရင်ထဲမှာ မွန်းကြပ်စေ ခဲ့တယ်။
အိမ်စီးပွားရေးကလည်း ကျပ်၊ ပညာရေးကလည်း တပိုင်းတစနဲ့ လမ်းခုလတ်မှာ ရပ်၊ ဖျတ်ခနဲ့ ပေါ်လာတဲ့ စိတ်နဲ့ အတူချခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ဘောလ်ပင် ကိုင်တဲ့လက်မှာ သေနတ်ဆိုတဲ့ အရာကို ပြောင်းကိုင် ဖြစ်ခဲ့တယ်။
စည်းကမ်းတကျနဲ့ အမိန့်နာခံတတ်အောင် အခက်အခဲမျိုးစုံကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး နှိပ်စက်ခံ၊ နားမခံသာအောင် အဆဲအဆိုခံရင်း အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်း ကျောင်းဆိုတဲ့ ငရဲပြည်က (၆) လအကြာမှာ လွတ်မြောက်လာတော့ ရင်ထဲမှာ တအားပျော်တာပဲဗျာ။
စစ်မှုထမ်းဖြစ်လာမှတော့ “အထက်ကပေးသော အမိန့်နဲ့ တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ပါမည်။” ဆိုတဲ့အ တိုင်း ငြင်းဆန်ခွင့်မရှိ လုပ်ရပါ၏ ဆိုတာမဆန်းပါဘူး။
ခံယူချက်- NO ရည်မှန်းချက်.. မရှိ၊ စစ်တပ်သမိုင်းကြောင်း ငါမသိ ဆိုတာမျိုးနဲ့ ပေးတာယူ ကျွေးတာစား ခိုင်းတာလုပ် ဆိုတဲ့ တုတ်တုတ်တောင် လှုပ်မရတဲ့ အမိန့်နာခံမှုအောက်မှာ ဆယ်စုနစ်တခု လွန်မြောက်ခဲ့ပါ၏။
အတွေ့အကြုံ အသက်ရွယ်နဲ့ သိမြင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတလေးမဆိုသလောက် ဦးနှောက်ထဲ ဝင်ရောက်လာချိန် …
“ဟိုက်!” မူဝါဒ၊ ကျင့်ဝတ်၊ ကျင့်ထုံးတွေနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင်နေပါလား။
“အမိန့်” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ အရာရာကိုဖုံးအုပ် ပုံဖျက်ခံနေရပါတယ်။ အသိ မီးသီးလေး ထွန်းလင်းချိန်မှာ မွန်းကြပ်မှုနဲ့ အတူ မပျော်ပိုက်မှုက တူးဆွတဲ့ တွန်းအားကြောင့် …
မင်းဘာလုပ်မလဲ… မင်းဘာလုပ်မလဲ… မင်းဘာလုပ်မလဲ ….
သားရေ… အဖေတို့ ရှေ့တန်း စစ်ဆင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ နယ်မြေဒေသက ရွာတွေကိုရောက်ရင် ပျော်လိုက်တာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွာ… စားဖို့လည်း မခဲရင်း တည်းခိုနေထိုင်ဖို့လည်း မခက်ခဲဘူးကွ ဒေသခံရွာသူရွာသားတွေ အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ကြက်၊ ဘဲ ကိုယ်တိုင် ရိုက်ချက်ပြီးကျွေးတာ စားရမှာတောင် အားနာတယ်ကွာ။
အရေးကြုံလို့ ခရီးသည်တင်ကား စီးပြီးသွားရရင်လည်း ကိုယ်ထက်ကြီးသူကော ငယ်သူတွေပါ “ရဲဘော်လေး ဒီမှာလာထိုင်”ဆိုပြီး နေရာဖယ်ပေးကြတယ်။ အင်္ကျီးအိတ်ကပ်ကြယ်သီးဖြုတ်ပြီး ခပ်နွမ်းနွမ်းပိုက် ဆံလေးတွေထုတ်ပြီး ကားခပေးရင် “နေပါစေ…ရဲဘော်လေး ထားလိုက် ထားလိုက် မယူပါရစေနဲ့”
ဆိုပြီး အိတ်ထဲ ပြန်ထည့်ပေးတယ်။ ဒါက ပြည်သူတွေဘက်က နွေးထွေးမှုပုံရိပ်တွေပေါ့ သားရယ်…။
အဖေတို့ကလည်း လူကြီးကအစ ကလေးအဆုံး မနိုင်ဝန်ထမ်းလာတာတွေ့ရင် ပေး ပေး ပေး ကျနော်တို့ သယ်ပေးမှာ ပေါ့ဆိုပြီး အတင်းဝင် ကူကြတယ်။ အားလပ်ချိန်တွေမှာလည်း ဒေသခံတွေရဲ့ ခြံ၊ တောင်ယာတွေမှာ ဝိုင်းစိုက်ကြ ဝိုင်း လုပ်ကြရတာ ဘာနဲ့မှ မတူတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေပေါ့။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး ကွ ကိုယ့်အတွက်ရထားတဲ့ ရိက္ခာတွေထဲက နို့ဆီတို့ ပဲတို့ သကြားတို့ အစရှိတဲ့ ကိုယ့်သွေး ကိုယ့်ချွေးနဲ့ ရင်းနှီးပေးဆပ်ပြီးရတဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာ တွေကို တုန့်ပြန်ပေးကျွေးရတာ တကယ်ကြည်နူးတယ်ကွာ..။
တခါက သူဖြတ်သန်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ တပ်နဲ့ပြည်သူ အမြဲကြည်ဖြူဆိုတဲ့ ဆက်ဆံမှု ပုံသဏ္ဌာန်တွေကို အားပါးတရ ပြော ပြခဲ့တဲ့ အဖေ့အသံဟာ နားဝမှာ ပဲ့တင်သံ ထပ်နေပါရော့လား။
အဖေ့ရဲ့အတွေ့အကြုံဟာ သားဖြစ်ပုံနဲ့ ထပ်တူပြုကြည့် တော့ “ဟုတ်မှ ဟုတ်ပါ့မလား…. အဖေ ရွှီးနေတာလား မသိ” ဆိုတဲ့ မတွေးကောင်း မတွေးအပ်တဲ့ အတွေးတောင်မှ ခေါင်းထဲမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးတာ မညာပါဘူးဗျာ။
ကျနော့် ဘဝကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ ညရဲ့ အ..ကာလကို လွန်မြောက်လို့ တမိုးသောက်ချိန်မှာ ကျနော် တပ်ထဲဝင်မယ်လို့ ပြောဆိုခွင့်တောင်းစဉ်က အဖေပြောခဲ့တဲ့ “အခြေအနေ အချိန် အခါရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဘယ်အရာမဆို တန်ဖိုးရှိတယ်ကွ။ မူလရှိရင်းစွဲ တန်ဖိုးထက် ပိုလာအောင် (ဝါ) ကျဆင်းဆုတ်ယုတ်သွားအောင် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အင်အားစုမှတပါး တခြားမရှိဘူးဆိုတာ နားလည်ထားပေါ့ကွာ..။
ဆိုတဲ့စကားတွေကို သဘောပေါက်တော့တယ်။ တကယ်တုံးတဲ့ငါ တကယ်အတဲ့ငါ ဆိုပြီး နောင်တ ရမိလေရဲ့။ သမိုင်းရေးလိုအပ်ချက်အရ ပြည်သူတွေကြားက သန္ဓေတည်ပေါက်ဖွားလာတဲ့ BIA, BDA, PBF, Burma Army ဆိုပြီးတော့ ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ စစ်တပ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာ ထင်ပေါ်ကြော်ကြား လူကြိုက်များရာက မှေးမှိန်ညှိုးနွမ်းအောင် စစ်တပ်ကို စစ်သားတွေက (အဆင်အတန်း အားလုံး) ပုံဖျက်လိုက်ကြတာပါလား ရှင်းရှင်းလေး သိမြင်လိုက် လေ၏။
မကျေမနပ်မှုလေးတွေနဲ့အတူ အဖေ့ကို အားကျမခံ တုံ့ပြန် ကြွားလိုက်ချင်တာက အဖေတို့တုန်းကလိုပဲ …
ပြည်သူလူထုက ပေးဆဲပါ၊ ဒါပေမယ့် စေတနာကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး မပေးရင် မရလို့။
ကားစီးရင်လည်း နေရာဖယ် ပေးဆဲပါ၊ ဒါပေမယ့် လေးစားလို့မဟုတ်ဘူး၊ စစ်ဖိနပ်နဲ့ ကြိတ်ကြိတ်ပြီး အနင်းခံရလို့။
ကားခလည်း မယူပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် သဘောကောင်းလို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ပြဿနာရှာမှာစိုးလို့။
ဒီလို တူညီမှုလေးတွေကြောင့် ကျနော့်ရင်ထဲမှာ အော်လိုက်မိတာက-
အဖေရေ… တူတော့တူတယ်၊ ဒါပေမယ့် …
မှတ်ချက် … ကလောင်ရှင် နေမင်းသူရဲ့ အမိန့်၊ စည်းကမ်းနဲ့ ကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရချိန်မှာ ကိုယ်ဖြတ် သန်းခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ရပ်ကို အခြေခံရေးဖွဲ့ပါ၏။ တပ်မှူးကောင်း တပ်သားကောင်းများကို မရည်ညွှန်းရပါ ကြောင်း ရိုးသားစွာ ဝန်ခံပါသည်။ (အားနည်းချက်များ ရှာဖွေပြုပြင်နိုင်ကြပါစေ။)
ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) နဲ့ အစိုးရတပ်တွေအကြား ဖြစ်ပွားတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ဒေသက ကချင်ပြည်သူတွေဟာ KIA အခြေစိုက်ရာ လိုင်ဇာမြို့နဲ့ တရုတ်နယ်စပ်ဘက်ကို သာမက မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ကိုလည်း ထွက်ပြေး ခိုလှုံနေကြရပါတယ်။
အခုအခါ မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်က ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းနဲ့ နီးစပ်ရာ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေ နေအိမ်မှာ လူ ၂,၀၀၀ ကျော်လောက် ရောက်ရှိ ခိုလှုံနေပြီး အများစုဟာ ကလေးငယ်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ကို ရောက်ရှိ ခိုလှုံနေတဲ့ ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခြေအနေကို ဗွီအိုအေ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ကို ရောက်ရှိ ခိုလှုံနေကြတဲ့ ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေဟာ လိုင်ဇာနဲ့ ၀ိုင်းမော်အကြား လမ်းတလျှောက်က ဒေသခံ ပြည်သူတွေဖြစ်ပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ခိုလှုံနေတာ တပတ်ကျော်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားကို ရောက်ရှိလာသူဟာ အခုဆို ၂,၀၀၀ ကျော်လောက် ရှိနေပြီး ဘာကြောင့် မြစ်ကြီးနားကို လာရသလဲ ဆိုတာကို ဒုက္ခသည်တဦးက အခုလို ပြောပါတယ်။
“အခု မြစ်ကြီးနားကို ရောက်နေတာက ၂,၀၀၀-၃,၀၀၀ လောက်တော့ ရှိပြီထင်တယ်။ ကလေးတွေက တ၀က်လောက်ရှိတယ်။ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေက ပိုများတယ်။ ကျမတို့က လိုင်ဇာဘက် ဆိုရင်လည်း ခရီးက အရမ်းဝေးတယ်။ ဆွေမျိုးဆိုလည်း အဲဒီဘက်က သိပ်မရှိဘူး။ ဒီ မြစ်ကြီးနားမှာဆိုတော့ ဆွေမျိုးတွေ တယောက် နှစ်ယောက် ရှိတဲ့အတွက် သူတို့ဆီမှာ မှီခိုဖို့ ဒီဘက်ကို လာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
“အခုလောလောဆယ်တော့ ကိုယ့်ဆီမှာပါတဲ့ ငွေတွေ၊ တချို့ကျတော့ ဆန်တွေ နည်းနည်းပါတယ်၊ အဲဒါနဲ့ ကိုယ့်ဆွေမျိုးအိမ်တွေကလည်း ကူညီပေးတယ်ပေါ့။ နောက်ပြီးတော့မှ အသင်းတော်တွေဆီမှာရော သူတို့ဆီမှာ အကူအညီတောင်းပြီး မှီခိုနေရတာ ဖြစ်တယ်။”
အမျိုးသား အများစုကတော့ သူတို့နေအိမ်နဲ့ တောင်ယာတွေကို ကြည့်ရှုလုပ်ကိုင်ဖို့ ကျန်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လောလောဆယ် မြစ်ကြီးနားကို ရောက်လာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခြေအနေကို သူက အခုလို ဆက်ပြောပါတယ်။
“တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ နေရာတွေဆို ဘာမှ ယူလို့ မရတော့ဘူး။ ကိုယ့်မှာပါတဲ့ အ၀တ်တန်ဆာနဲ့ပဲ ထွက်ပြေးလာရတယ်။ အခုလောလောဆယ်ကတော့ ကျမတို့ဆီမှာ စားဝတ်နေရေးပေါ့၊ ပြီးတော့ စောင်မပါတာတို့၊ အ၀တ်အထည် အလဲအထည် မပါတာတို့၊ တချို့ကျတော့ မွေးဖွားမယ့် မိခင်တွေ ပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာလည်း အားတွေနည်းတယ်။ နောက် တချို့ကျတော့လည်း ကျန်းမာရေးမရှိ ဖြစ်နေတာပေါ့။”
မြစ်ကြီးနားမြို့က ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး အသင်းတွေနဲ့ နီးစပ်သူ တယောက်ကတော့ တပ်ကုန်း နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းမှာ လူ ၁၀၀ ကျော်၊ ဇီးလွန် ဘုရားကျောင်းမှာ ၁၆၀ ကျော်လောက် ရောက်ရှိ နေတယ်ဆိုတာ သိရကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဘုရားကျောင်းတွေက လက်ခံ ကျွေးမွေးထားရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ရေရှည် အခက်အခဲကိုလည်း သူက အခုလို ပြောပါတယ်။
“တပ်ကုန်းဘုရားကျောင်း နှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်းပေါ့၊ အဲဒီမှာ ၁၀၅ ယောက် အတိအကျကိုရှိတာ။ ဒီဘုရားကျောင်းအတွက် သူတို့ ထပ်လည်း လက်မခံနိုင်သေးဘူးပေါ့။ ဒီအတိုင်းအတာနဲ့ပဲ သူတို့ နိုင်တယ်ပေါ့။ မနေ့ကတော့ အင်ဂျန်ဒုံ တပ်ကုန်းရဲ့ အပေါ်ဘက်ပေါ့၊ ၇ ယောက်က အဲဒီဘက်ကို လွှဲလိုက်ပြီ။ မနေ့ညက အင်ဂျန်ဒုံ ဘုရားကျောင်းမှာ အယောက် ၇၀ ရောက်ဖို့ ရှိတယ်။ လမ်းမှာ နည်းနည်း အခက်အခဲရှိတော့ ညမိုးချုပ် နောက်ကျနေတယ်။
“ဒီ Church တွေကလည်း တအား စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ နေရာလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲဒီကျတော့ တရက်ကို ၇၀,၀၀၀ နဲ့ ကျွေးမယ်ဆိုရင်တောင် တလဆို ၂၁ သိန်းလောက် ရှိသွားပြီ။ ရေရှည်ဆို ဘယ်လို ခံနိုင်မလဲပေါ့။”
ဒီလို ဘုရားကျောင်းတွေမှာ လာရောက် ခိုလှုံကြသူတွေဟာ မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်မှာ အသိမိတ်ဆွေ မရှိသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို ဘုရားကျောင်းက အသင်းသူ အသင်းသားတွေက စုပေါင်း ထောက်ပံ့ထားရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုတော့ ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရ ၀န်ကြီးတွေက လာရောက်ကြည့်ရှုတာရှိပြီး ဆန်၊ ဆီ စတာတွေနဲ့ အခြား လိုအပ်တာတချို့ ထောက်ပံ့တာတွေ ရှိတယ်လို့ ဒုက္ခသည်တွေက ပြောပါတယ်။
၀ိုင်းမော်မြို့က ရိုမန်ကက်သလစ်နဲ့ နှစ်ခြင်း ဘုရားကျောင်းတွေမှာလည်း အနည်းဆုံး ဒုက္ခသည် ၅၀၀ ကျော် ၆၀၀ လောက် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီလို မြစ်ကြီးနားနဲ့ ၀ိုင်းမော်မြို့တွေကို တိမ်းရှောင်လာသူ တချို့ဟာ သူတို့ ဆွေမျိုးတွေနဲ့ နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေတွေဆီမှာ ခိုလှုံ နေထိုင်နေတာကြောင့် စာရင်းအတိအကျတော့ ကောက်ယူနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ထွက်ပြေးလာသူ တချို့ဟာ သူတို့ပိုင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တဲ့ ကြက်၊ ၀က်နဲ့ ကျွဲ၊ နွားတွေကို ခြံကလွှတ်ပြီး ထားခဲ့ရတာတွေ ရှိသလို စပါးကျီတွေကိုလည်း ဒီအတိုင်း ထားခဲ့ရတာတွေ ရှိပါတယ်။
အခုအခါမှာ KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာ၊ တိုက်ပွဲ စတင်ဖြစ်ပွားရာ မိုးမောက်မြို့နယ်ဘက်က မိုင်ဂျာယန်နဲ့ တရုတ်နယ်စပ် ဒေသမှာ ခိုလှုံနေသူ ကချင်ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၁၀,၀၀၀ ကျော်လောက် ရှိမယ်လို့ ဒုက္ခသည်အရေး ဆောင်ရွက်နေသူတွေက ခန့်မှန်းပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာ KIA ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေအကြား ဆွေးနွေးတာတွေ စတင်နေပေမဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲဖို့အတွက် နှစ်ဘက်စလုံးက အာမခံနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေ မရှိသေး တာကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေ အိမ်ပြန်ရမယ့် အခြေအနေဟာ မရေမရာ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by နော်မန် at 1:18 AM
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လာမည့် တနင်္လာနေ့တွင် ပုဂံသို့ ဘုရားဖူး သွားမည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ဦးဟံသာမြင့်က အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်ပြီး လေးရက် ကြာမြင့်မည်ဟု ဆိုသည်။
ပုဂံသို့ လေးရက်ကြာ ဘုရားဖူး သွားမည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ဦးဟံသာမြင့်က ပြောကြား (Photo :: NLD)
“၄ ရက်နေ့ တနင်္လာနေ့ကို ပုဂံကို သွားပါ့မယ်။ လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ သွားပါ့မယ်။ ဘယ်လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ဆိုတာ မသိပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ကိစ္စသွားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ ရုံးကို ခွင့်တိုင် ထားတာကိုပဲ သိပါတယ်။ ကျန်တာ အဖွဲ့ချုပ်က မသိပါဘူး” ဟု ဦးဟံသာမြင့်က မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
၂ဝ၁ဝ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် နေအိမ်အထိန်းသိမ်းခံမှ ပြန်လွတ်ပြီးနောက် ပထမဆုံး ရန်ကုန်ပြင်ပ ခရီးစဉ် ဖြစ်ကာ၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်၏ လုံခြုံရေးအတွက် အနည်းဆုံး လူငယ် ၁ဝ ဦး လိုက်ပါသွားမည်ဟု NLD ခေါင်းဆောင်များက ပြောသည်။ ခရီးစဉ် အသေးစိတ်ကို ပြောဆိုရန် ငြင်းဆန်ထားပြီး၊ ပုဂံမြို့တွင် NLD ပါတီဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် မရှိဟု ဆိုသည်။
“ပုဂံမှာ ဘုရားဖူးသတ်သတ်သွားတဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ရက်က အားလုံးဆိုရင် ၄ ရက်လောက် ကြာမယ် ထင်ပါတယ်။ သောကြာနေ့ထိ ခွင့်ယူထား ပါတယ်”ဟု ဦးဟံသာမြင့်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်မှ ညောင်ဦးမြို့သို့ လေယာဉ်ဖြင့် သွားရောက်ရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ညောင်ဦးမှ ပုဂံသို့ ကားလမ်းပေါက်သည်။ ပုဂ္ဂလိက လေကြောင်းလိုင်း အားလုံးပင် ရန်ကုန်မှ ညောင်ဦးသို့ ပြေးဆွဲနေကြပြီး မနက်အစောပိုင်း တွင် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှ ထွက်ခွါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ၏ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းများ မလုပ်ဆောင်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက အချိန်ကိုက် သတိပေးထားမှုနှင့် မြို့ကြီးများတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ မကြာသေးခင် က ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ယခုခရီးစဉ် လုံခြုံရေးအတွက် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းတွင် စိုးရိမ်တကြီး ဆွေးနွေးစရာတခု ဖြစ်နေသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူထားကြောင်း NLD ရုံးအဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်က ပြောသည်။
ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သော လက်ရှိ မန္တလေးတိုင်း ပုဂံမြို့ရှိ အဆောက်အအုံ အများအပြားမှာ ၁၁ ရာစုနှင့် ၁၃ ရာစုနှစ်အတွင်း တည်ဆောက်ထားခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ရှေးဟောင်း စေတီပုထိုး အများအပြား တည်ရှိရာ မြို့ဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်တွင် အိန္ဒိယ မီဒီယာအချို့က မကြာသေးခင်က ရေးသားခဲ့သော အကြောင်းအရာ တခုဖြစ်သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အချုပ်မှ မလွှတ်ပေးခင် “နိုင်ငံခြား အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း မပြုရန်” မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ကြိုတင် သဘောတူညီခဲ့သည် ဆိုသော ကိစ္စကို မဇ္ဈိမက မေးမြန်းရာ သဘောတူညီမှု မယူထားကြောင်း ဦးဝင်းထိန်က ပြောသည်။
“မရှိပါဘူးခင်ဗျ၊ အပတ်တိုင်းလို၊ နေ့တိုင်းလို တွေ့နေတာပဲ။ အဲဒါဆို မှားတာပေါ့။ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။
Posted by နော်မန် at 12:48 AM
၂၈.၆.၂၀၁၁ ရက်နေ့ ၀၉ ၀၀ နာရီတွင် ထုတ်လွှင့်သော ဘီဘီစီ၏ ပထမဆုံးသော ရေဒီယို အသံလွှင့်ချက်
Sue Lawley ။ လန်ဒန်မြို့အသံလွှင့်ဌာနမှာရှိတဲ့ အသံလွှင့်ခန်းမကနေ ကြိုဆို နှုတ်ခွန်းဆက်သ အပ်ပါတယ်။ အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ လွတ်လပ်မှုကို လိုလားတောင့်တတဲ့ လူသားတွေကို ကိုယ်စားပြုသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ မြန်မာ ပြည်သူတွေရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းရာမှာ ဘဝကို မြှုပ်နှံ ထားခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရဲ့ မျှော်လင့်ချက် အထိမ်းအမှတ် လက္ခဏာတရပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့ပို့ချမဲ့ ပို့ချချက်နှစ်ပိုင်းအနက် ပထမပိုင်းကတော့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ လျို့ဝှက်စွာ အသံသွင်းယူပြီး ပြည်ပကို ခိုးထုတ်လာခဲ့တဲ့ တိပ်ခွေနဲ့ ပို့ချချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အတိုက်အခံရဲ့ သဘောသဘာဝ နှင့် မြန်မာပြည်တခုတည်းအတွက်သာမက ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးအတွက် အရေးပါပုံကို ရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
လွတ်လပ်မှုရယူခြင်းနှင့် လွတ်လပ်မှုအတွက် အနိုင်ရရှိရန် လူသားတို့ရဲ့ သန်နိဋ္ဌာန်စိတ်ဟာ ဘယ်အခါကမှ မရှိဘူးတဲ့ ပိုမိုအားကောင်းတဲ့ အချိန်မှာ ရောက်ရှိနေပါတယ်၊ အခြားသူများရဲ့ အတိုက်အခံ ပြုလုပ်မှုကနေရလာတဲ့ အားတက်မှုတွေဟာ အာဏာရှင်အစိုးရ ဖြုတ်ချရေး ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသ နိုင်ငံများစွာက ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝ တွေထဲမှာ မောင်းနှင်နေတဲ့အရာ ဖြစ်နေပါတယ်၊ တချိန်တည်းမှာပဲ တည်ရှိဆဲ လွတ်လပ်မှုတွေကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးပမ်း နေတဲ့ အကြမ်းဖက်ဝါဒ ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ရေးဟာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
ယခုနှစ်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Reith Lectures အပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နှစ်ပေါင်း (၅၀) နီးပါး စစ်အာ ဏာရှင်ရဲ့ အုပ်‌စိုးမှုခံစားနေရတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ မင်းဆိုးမင်းညစ်ကို အတိုက်အခံပြုလုပ်ခဲ့မှု ဖြစ်စဉ်ကို ပထမပိုင်းမှာ တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် တတိယပိုင်း ဟောပြောမှုကို စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးဌာ နဖြစ်တဲ့ MI5 ရဲ့ အကြီးအကဲဟောင်း Eliza Manningham-Buller က ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အကြမ်းဖက်ဝါဒရဲ့ သဘောသဘာဝနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ရရှိထားတဲ့ သူမရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေ လွတ်လပ်မှုအပေါ် နောက်ထပ်မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးအပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မိခင်နိုင်ငံကိုပြန်သွားတဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကစပြီး မြန်မာစစ်အာဏာရှင်ကို အတိုက်အခံပြုရာမှ ဦးဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်၊ နောက် (၂)နှစ်အကြာမှာ သူမရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီဟာ အထွေထွေရွး ကောက်ပွဲမှာ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့ပေမယ့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို မသိကျိုးကျွံပြုခဲ့ကြ ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချထားခြင်းခံခဲ့ရပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မိသားစုနှင့် ကွဲကွာခဲ့ရသည့်‌ အပြင် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ကာကွယ်ဖို့အတွက် အစိုးရက နိုင်ငံပြန်လာခွင့်မပေးမှာ စိုးရိမ်တဲ့အတွက် သေအံ့ဆဲဆဲ ခင်ပွန်းသည်ဆီ မငဲ့မကွက်သွားရောက်ခြင်း မပြုခဲ့ပါဘူး၊ သူမဟာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု ချီးမြှင့်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အကုန်ပိုင်းမှာ သူမဟာ တတိယအကြိမ်မြောက် နှစ်ရှည် အကျဉ်းကျခံ နေရမှုကနေ ပြည်လည်လွတ်မြောက် လာခဲ့ပါသည်။ ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ “The Lady” လို့ လူများစွာရဲ့ လေးစား ကြည်ညိုခံထားရတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ဟောပြောမှုကို နားဆင်ကြရအောင်ခင်ဗျာ။ ဘီဘီစီ ရဲ့၂၀၁၁ ခုနှစ် Reith Lecture အဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပို့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပရိတ်သတ်၏ လက်ခုပ်သြဘာသံများ …
အောင်ဆန်းစုကြည် … BBC ကနေတဆင့် သင်တို့အား စကားပြောခွင့်‌ရခြင်းဟာ ကျမအတွက် အထူးအဓိပ္ပါယ်သက် ရောက်စေပါတယ်၊ နောက်ထပ်ဆိုလိုတာကတော့ ကျမဟာ တရားဝင် လွတ်လပ်သူ တဦးဖြစ်ပါတယ်၊ ကျမဟာ တ ရားဝင်လွတ်လပ်မှုမရှိခဲ့တဲ့ အချိန်က ဆိုလိုတာက နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချထားခြင်းခံရစဉ်အခါက ကျမဟာ BBC ကို နားထောင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို နားသောတဆင်ခြင်းကနေ ကျမကို လွတ်လပ်မှုတမျိုးပေးခဲ့ပါတယ်၊ အခြားသူ များရဲ့စိတ်နှင့် ဆက်သွယ်ခွင့်ရတဲ့ လွတ်လပ်မှုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါဟာ လူပုဂ္ဂိုလ်ချင်း အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုလို့ ပြောလို့မရပေမဲ့ လူအချင်းချင်း ဆက်သွယ်မှုရဲ့ပုံစံ တမျိုးဖြစ်ပါတယ်၊ အခြားလူသားများနှင့် ဆက်သွယ်မှု လွတ်လွတ် လပ်လပ် ပြုနိုင်ရန်မှာ သင်တို့အနေနဲ့ သင်တို့ရဲ့အတွေး၊ သင်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်၊ သင်တို့ရဲ့ ပျော်ရွှင် ရယ်မောမှု၊ ပြီးတော့ အကြိမ်များစွာမှာရှိတဲ့ သင်တို့ရဲ့ ဒေါသ အမျက်ထွက်မှု၊ နာကျည်းမှုတို့ကို မျှဝေပေးဖို့ ဆန္ဒဟာ ဘယ်သော အခါကမျှ ချိုးဖောက်ခြင်းမခံရတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ဖြစ်သင့်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျမဟာ ဒီနေ့မှာ သင်တို့နှင့်အတူ တဦး ချင်းတွေ့ဆုံခွင့် မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင်မှ ကျမ နားလည်ထားတဲ့ လွတ်လပ်မှု မရှိလို့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ နိုင်ငံဘဝမှာ နေထိုင်နေရဆဲဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းက သင်တို့ကို ကျမရဲ့အတွေးတွေ မျှဝေပေးခြင်းကို လူသားချင်း ဆက်သွယ်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရနေမှု အပေါ် များစွာပဲ ကျေနပ်အားရခြင်း ဖြစ်မိပါတယ်။
ကျမဟာ ကံအားလျှော်စွာပဲလား ဒါမှမဟုတ် တိုက်ဆိုင်လို့ပဲလား ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုစလုံးကြောင့်လား ပထမဦးဆုံး ဖတ်ဖူးတဲ့ ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတိစာအုပ်ကတော့ ၁၉၅၀ ခုနှစ် ဦးပိုင်းနှစ်များ အတွင်း ကွန်မြူနစ်ပါတီ သန့်စင်ရေး ကာ လမှာ မှားယွင်းတဲ့ဂိုဏ်းဖက်က ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဟန်ဂေရီ အမျိုးသမီး တဦးရေးခဲ့တဲ့ Seven Years Solitary ဆိုတဲ့ စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်၊ အသက် (၁၃)နှစ် အရွယ်သာရှိတဲ့ ကျမဟာ သူမကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့စိတ် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လွှမ်း မိုးနေတဲ့ ယောက်ကျားတွေနဲ့သာ လူလူချင်း ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ရတဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း သူမရဲ့ အတွေးကို ပြတ်သား အောင် သူမရဲ့စိတ် မပျက်ပြားရလေအောင် တဦးတည်းကြံ့ကြံ့ခိုင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတဦးရဲ့ စိတ်ဆုံးဖြတ် ချက် ခိုင်မာပြတ်သားမှုနှင့် ဆင်ခြင်တိုင်းထွာနိုင်တဲ့ ဉာဏ်တွေဟာ ကျမကို ညို့ယူဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လူတယောက်ဟာ သဘောထား ကွဲလွဲမှုရှိတဲ့ အကြောင်းကိစ္စရပ်မှာ မဖြစ်မနေပါဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် ဖြစ်လာ သမျှကို သည်းညည်းမခံနိုင်မှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရေးဟာ အခြေခံအကျဆုံးသော လိုအပ်ချက်တွေအနက် တခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်၊ တကယ်တော့ သည်းညည်းမခံ နိုင်မှုဟာ တည်ရှိဆဲသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရဲ့ ကြီးမား တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတရပ် ဖြစ်နေပါတယ်။
ဘယ်လိုလူစားမျိုးတွေဟာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှု လမ်းကြောင်း လျှောက်လှမ်းဖို့အတွက် တမင်သက်သက် ရွေးချယ်ကြပါသလဲ၊ Max Weber က စိတ်ထားထက်သန်မှု၊ တာဝန်သိတက်မှုနှင့် အတိုင်းအဆ သိတတ်မှုတို့မှာ နိုင်ငံရေးသမားတွင် ရှိရမည့် အရေးပါသော အရည်အချင်း (၃) ရပ်အဖြစ် တိတိကျကျ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်၊ ပထမအချက်ဖြစ်သည့် စိတ်အားထက်သန်မှုဆိုသည့်အချက်ကို ၎င်းက အရေးကိစ္စတရပ်တွင် လုံးလုံးလျားလျား စိတ်အာရုံနှစ်မြှုပ်ထားမှုဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်၊ အဲဒီလို စိတ်အားထက်သန်မှုဟာ သဘောထားကွဲလွဲမှုရှိတဲ့ လူတွေအတွက် အလွန်တရာ မှ အရေးပါလှပါတယ်၊ အဲဒီလို စိတ်အားထက်သန်မှုမျိုးဟာ မိမိကိုယ်ကို အမွှမ်းတင်ပြောဆိုသည်ဖြစ်စေ၊ မပြောဆို သည်ဖြစ်စေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရသူ၊ လူတဦးချင်းနှင့် လူတိုင်း၏ စိတ်နှလုံးမှာ ထားရှိရမည့်အရာဖြစ်ပါတယ်၊ အတိုက် အခံ နိုင်ငံရေးလောကအတွက် ပြောဆိုနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးလောကမှာ ဇောက်ချလုပ်ကိုင်နေသူများက အသိအမှတ်ပြုပေးနိုင်သည့် ထူးခြားသော ပြင် ပ လက္ခဏာများ မရှိပါဘူး၊ အကျယ်အဝန်း အသင့်အတင့်ရှိပြီး ပြိုလုဆဲဆဲ တဲအိမ်နှင့် NLD ရုံးချုပ်ကို နွားတင်းကုတ် အဖြစ် တကြိမ်ထက်မက ဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်၊ အဲဒီမှတ်ချက်စကားကို ဂရုဏာနှင့် အမြဲတမ်းပြုလေ့ရှိပြီး ရံဖန်ရံခါမှာ နှစ်လိုဖွယ်အပြုံးနှင့်‌ ပြုံးပြီးဆိုကြပေမဲ့ ကျမတို့တော့ ခုခံ ချပေပြီး ပြန်ပြောခဲ့တာမရှိပါဘူး၊ အားလုံးသောအရာတွေ ထက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးမှုအများဆုံးရှိတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတခုဟာ နွားတင်းကုတ်တခုကနေ အစပျိုးခဲ့တယ်ဆိုတာ ဟုတ် ပါသလား။
ဆင်းရဲနုံချာပြီး လူတွေနဲ့မချိမဆန့် ပြည့်ကြပ်နေတဲ့ရုံးခန်းမှာ သင်တို့အနေနဲ့ သာမန်လူအသွင် သဏ္ဌာန်ရှိတဲ့လူတွေကို တွေ့မြင်နေရလိမ့််မယ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ကဗျာသမားဆန်ဆန် ဆံပင်ကို ဘိုသီဘတ်သီနှင့် လူအိုကြီးတယောက်ဟာ ဝါရင့် သတင်းထောက်တဦး ဖြစ်ပါတယ်၊ သူဟာ အတိုက်အခံသမားတို့၏ အကြီးအမှူးတဦးလည်းဖြစ်ပြီး ထောင်ထဲမှာ နှစ် (၂၀) ကြာနေခဲ့ပြီး ပြန်လွတ်လာတဲ့အခါမှာ “ဒါလားဟဲ့ ငရဲ” (Is This A Human Hell) အမည်ရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ ကြောက် မက်ဖွယ်ရာ အတွေ့အကြုံအကြောင်း စာအုပ်တအုပ် ရေးသားခဲ့ပါတယ်၊ သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူ ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိနေဆဲဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း အမြဲသတိပြုနှလုံးသွင်းနိုင်ရေးအတွက် အပြာရောင် ထောင်ဝတ်စုံကို အမြဲဝတ်ဆင်လေ့ရှိတယ်။
သပ်ယပ်စွာဝတ်ဆင်ထားပြီး မျက်နှာမှာ ပူပင်သောကရဲ့ အ ရေးအကြောင်းတွေမရှိဘဲ မျက်မှန်တပ်ထားတဲ့ ဒီအမျိုး သမီးဟာ ထောင်ထဲမှာ (၉) နှစ် နေခဲ့ရတဲ့ ဆရာဝန် တဦးဖြစ်ပါတယ်၊ သူမဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ (၃) နှစ်အကြာက ထောင်က လွတ်လာပြီးကတည်းက ကျမတို့ ပါတီရဲ့ လူမှုရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာရေးစီမံကိန်းတွေမှာ မအားမလပ်နိုင်အောင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီမှာ အသက် (၈၀) အရွယ် ချစ်စဖွယ် အမျိုးသမီးအိုကြီးတွေရှိပါတယ်၊ သူတို့ဟာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကစပြီး ကျမတို့ ရုံးခန်းကို ပုံမှန်လာရောက်လျှက်ရှိသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်၊ ကျမတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အရေးလှုပ်ရှားမှုများရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေများစွာတို့ဟာ အကြီးအကျယ်ဖြိုခွင်းခံရပြီး ထောင်ထဲ ရောက်ရှိသွားခဲ့ရတဲ့ အချိန် ကာလဟာ ကျမတို့အတွက် ဆူနာမီကြီး တခုလိုပါပဲ။
ကျမတို့ပါတီရဲ့ အစည်းအဝေးတခုမှာ ကျမတို့ဟာ အရှုံးပေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အစိုးရကို ပြသဖို့အတွက် ဝေးရာ အရပ်ဆီကို ပို့ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ သူတွေရဲ့ ဇနီးတွေ၊ ကလေးငယ်တွေ၊ မိဘအိုကြီးတွေကို လာရောက်စုဝေးဖို့ ဖိတ် ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးအိုကြီးတွေဟာ စံပြအဖြစ် ရွေးကောက်ခံရတဲ့ သတ္တိရှိသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့တတွေဟာ ဇွဲကောင်းသူများ ဖြစ်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့အနေနဲ့ ကျမတို့ရဲ့ NLD ရုံးမှာ မြန်မာအနေနဲ့ ‌ပြောရမယ်ဆိုရင် အရွယ်ကောင်းလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မယ့် အမျိုးသား အမျိုးသမီးတွေကိုလည်း တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ သူတို့ တတွေဟာ အသက် (၄၀) ဝန်းကျင်အ ရွယ် ရှိကြသူများဖြစ်တယ်။ သူတို့တတွေဟာ ဒီမိုကရေစီအ‌ရေး လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်လာကြစဉ်အခါက အသက် (၂၀) အရွယ် ဒါမှမဟုတ် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် လွန်မြောက်ပြီးခါစများ ဖြစ်ကြတယ်။ တက်ကြွတဲ့ မျက်နှာနဲ့၊ တောက်ပ တဲ့ မျက်လုံးနဲ့၊ အရေးတော်ပုံအတွက် စိတ်အားထက်သန်ကြသူများ ဖြစ်တယ်။ ခုနေအခါမှာတော့ သူတို့တတွေဟာ ပိုပြီးတည်ငြိမ်လာပြီး ပိုပြီးရင့်ကျက်လာကာ ဆုံးဖြတ်ချက် ပိုမိုခိုင်မာပြတ်သားလာကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ စိတ်အား ထက်သန်မှု ပြင်းပြလာခဲ့ရခြင်းဟာ သူတို့ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ အမှုစစ်ဆေး စီရင်ခံရမှုကနေ အစပျိုးခဲ့ ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်တို့အနေနဲ့ သူတို့ဟာ ထောင်ထဲရောက်ဖူးရဲ့လားလို့ မေးရမဲ့အစား ထောင်ထဲကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် ရောက်ဖူးပြီလဲလို့ မေးမြန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတဲ့နောက် ငယ်ရွယ်တဲ့လူတွေ ဒါပေမဲ့ သိပ်အငယ်ကြီးတွေမဟုတ်တဲ့ လူငယ်တွေဟာ စစ်ကြောမေးမြန်းခြင်းနှင့် ထောင်တွင်း အကျဉ်းချခံရခြင်းတို့နှင့် ကြုံတွေ့ဖူးခြင်းရှိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ မျက်နှာဟာ မျှော်လင့်ချက်ရဲ့ အ ရောင်တောက်ပနေပေမဲ့ အယူအဆအလွန်အကျွံ အစွန်းရောက်ခြင်း မရှိပါဘူး။ သူတို့က သူတို့ဖာသာသူတို့ ဘာလုပ် ရမယ်ဆိုတာကို သိကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ အနာဂတ်အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကြည်လင်တဲ့ မျက်လုံးနဲ့ လက်ခံထား ကြသူတွေ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ လက်နက်ဟာ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ချပ်ဝတ်တန်ဆာဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ကျမတို့ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အဲဒီစိတ်အားထက်သန်မှုဟာ ဘာလဲ၊ အစဉ်အလာအရ တည်ရှိလာတဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို စွန့်လွှတ်တဲ့ အ နေနဲ့ ကျမတို့က စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တဲ့ အရေးတော်ပုံဆိုတာ ဘာလဲ၊ သဘောထား ကွဲလွဲသူတွေ ရဲ့ အခြေခံကျတဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ Vaclav Havel အဆိုအရဆိုလျှင် ကျမတို့ဟာ လူတိုင်းရဲ့ လွပ်လပ်ခွင့်နဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဘဝတည်ဆောက်ခွင့်ကို အကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက် ရည်စူးလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။ အခြားနည်းနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျမတို့ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုဟာ လွတ်လပ်မှု ရှိပါတယ်။
စိတ်အားထက်သန်မှုကို ဘာသာရေးအမြင်အရ ဒုက္ခလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ ကျမအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး စကားရပ် အနေနဲ့ အခိုင်အမာ ပြောလိုတာကတော့ စိတ်အားထက်သန်မှုဆိုတာ ခွက်တခုကို လက်လွတ်အဆုံးအရှုံးခံရတာ ထက် အမိအရ ရယူဖို့ တမင်ရည်ရွယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ ရွေးချယ်မှုကြောင့် ခံစားရတဲ့ဒုက္ခလို့ သွယ်ဝိုက် ညွှန်းဆိုလိုပါ တယ်။ ဒါဟာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့ဟာ ဒုက္ခခံစားရမှုကို မလိုလားပါ ဘူး။ ကျမတို့ဟာ ဒုက္ခခံစားရမှုကို သာယာတတ်တဲ့ သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့ စိတ်အားထက်သန်မှုရဲ့ အကြောင်း ပြချက်အပေါ်မှာ တန်ဖိုး မြင့်မားစွာထားခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ တခါတရံမှာ ကျမတို့ ကိုယ်တိုင်အတွက် ထက် ဒုက္ခကို ရွေးချယ်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလအတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ မြို့ငယ်လေးတမြို့ဖြစ်တဲ့ ဒီပဲယင်းမြို့ကို စည်းရုံးရေး အတွက် သွားရောက်တဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ကျမနဲ့အတူ လိုက်ပါလာတဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ထောက်ခံသူများရဲ့ ယာဉ်တန်း တခုဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ အမိန့်ပေးမှုနှင့် ပြုလုပ်တဲ့ အမည်မသိ ရန်ပြုသူများရဲ့ ဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ တိုက် ခိုက်သူများရဲ့ ကံကြမ္မာကို ဒီနေ့အထိ ဘာမျှ မသိရသေးပေမဲ့ သားကောင်များဖြစ်တဲ့ ကျမတို့ဟာ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါ တယ်။ ကျမဟာ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ အင်းစိန်ထောင်ကို ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ခံခဲ့ရပြီး တယောက်တည်း အ ထီးကျန်စွာ ထိန်းသိမ်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကျမဟာ အခြားအကျဉ်းသားများထားရှိရာ အဆောင်နဲ့ သီးသန့်ခွဲခြားဆောက် ထားတဲ့ ဘန်ဂလိုငယ်တခုထဲမှာ ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းခံခဲ့ ရတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဝန်ခံ‌ပြောကြားလိုပါတယ်။
တမနက်မှာ ကျမဟာ နေ့စဉ်လုပ်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေရင်း တန်းလန်းမှာပဲ ငါမဟုတ်သေး ပါလား၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တယောက်အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမဲ့ ဝတ်တရားတခုကတော့ မိမိ ကိုယ်ကို ကျန်းမာအောင် တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက် လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုနည်းနဲ့မှ မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အိပ်ယာထဲမှာ ခွေခွေလေးလှဲနေပြီး ဒီပဲယင်းမှာ ကျမနဲ့အတူ ရှိခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ ကံကြမ်မာအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်နေလို့ မဖြစ်ဘူး။ သူတို့ထဲက လူဘယ်နှစ်ယောက် အပြင်းအ ထန် အရိုက်ခံခဲ့ရသလဲ၊ သူတို့ထဲက လူဘယ်နှစ်ယောက် ကျမမသိတဲ့နေရာဆီကို အတင်းဆွဲခေါ်ခံသွားရသလဲ၊ သူ တို့ထဲက လူဘယ်နှစ်ယောက် သေခဲ့ရသလဲ၊ ပြီးတော့ NLD အတွက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်နေသလဲ၊ ကျမက စိုးရိမ်ပူပန်မှု နဲ့ မသေချာ မရေရာမှု ခံစားနေခဲ့ရတယ်။ ကျမ ဒီနေရာမှာ ရောက်နေရမှာ မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျမဟာ ‘မဟုတ်သေးဘူး၊ ဒါဟာ ငါမဟုတ်ဘူး၊ ဒါဟာ တယောက်ယောက် ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဖြစ်ခဲ့သမျှ အားလုံးဟာ ငါတွေ့ကြုံခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး’ လို့ Akhmatoava ရေးသားခဲ့တဲ့ စာကြောင်းကို ပြန်ပြီး အမှတ်မရခဲ့သေးဘူး။ အချိန်များစွာ ကြာမြင့်လာသည့်အခါမှသာ ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင် အိမ်ဆီကို ပြန်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဆက်လက် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲမှာပဲ အဲဒီစကားလုံးတွေကို ကျမပြန်ပြီး အမှတ်ရနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ပြန်လည်အမှတ်ရ မှုရဲ့ တခဏတာအချိန်လေးမှာပဲ ကျမဟာ ခွန်အားတွေ တိုးပွားလာခဲ့ရပါတယ်။
ကဗျာဟာ ကြီးကျယ်တဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုရှိပြီး သူ့မှာ နေရာနှင့် အချိန်တို့ရဲ့ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှု မရှိဘူးဆိုတာ သိထား ပါတယ်။ အပြာရောင် ထောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ ဦးဝင်းတင်ဟာ စစ်ကြောမေးမြန်းခြင်း ခံနေစဉ်အချိန်မှာ Henley ရဲ့ Invictus ဆိုတဲ့ကဗျာဟာ အားကိုးအားထားပြုရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ကဗျာဟာ ကျမရဲ့ဖေဖေနဲ့ လွတ်လပ်ရေးအ တွက် တိုက်ပွဲဝင်စဉ်ကာလ ခေတ်ပြိုင်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် လွတ်လပ်မှုရရှိရေးတိုက်ပွဲဝင်ရာမှာ လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြိုးစားရုန်းကန်ခြင်းနှင့် ဒုက္ခခံစားရမှု၊ သွေးချင်းချင်းနီနေပြီး ဦးမညွှတ်တဲ့ ဦးခေါင်း၊ သေဆုံးခြင်း အဲဒါ တွေအားလုံးဟာ လွတ်မြောက် ရေးအတွက် ဖော်ပြတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။
ကျမတို့ လိုလားတောင့်တတဲ့ လွတ်လပ်မှုဆိုတာဘာလဲ၊ ကျမတို့ရဲ့ အာသာဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ အတိုက်အခံသမားများ လို ချင်တဲ့ လွတ်လပ်မှုဟာ ပညာရှင်များအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ သီအိုရီနဲ့ အထူး သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ အဲဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပါယ် ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ အတင်းအကြပ်မေးလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူတို့တတွေက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မရှိရေး၊ ဒါမှမဟုတ် လွတ်လပ်စွာ‌‌ပြောဆိုခွင့်၊ သတင်းဖော်ပြခွင့်၊ အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်၊ ဒါမှမဟုတ် မိမိတို့အလိုရှိတဲ့ အစိုးရကို ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်၊ မိမိ ပြုလုပ်လိုသည့်အရာကို ပြုလုပ်နိုင်ခွင့် စသည်ဖြင့် သူတို့ အလွတ်ကျက်ထားတဲ့အတိုင်း ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက် ရွတ်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရိုးစင်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့်၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ရိုးစင်းမှု ဖြစ် ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်း အဲဒီဖော်ပြချက်တွေဟာ လွတ်လပ်မှုရဲ့ သဘောသဘာဝကို ထင်ဟပ်ဖော်ပြလျှက် ရှိပါတယ်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချထားမှု သက်တမ်းတိုးမြှင့်မှု အကြိမ်တိုင်းမှာ လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုခံစားရသလဲလို့ အမေးခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျမရဲ့စိတ်ဟာ အမြဲတမ်းလွတ်မြောက်နေတဲ့အတွက် ထူးခြားတဲ့ခံစားချက်မရှိပါဘူးလို့ အ ချိန်မရွေး ပြန်ဖြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ် လွန်မြောက်မှုဟာ သူ့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်နှင့် လိုက် လျောညီထွေမှုရှိတဲ့ အကြောင်းအရာရဲ့နောက် ဆက်တွဲအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ Isaiah Berlin က အတွင်းသဏ္ဌာန်လွတ်မြောက်မှုရဲ့ အန္တရာယ်များအပေါ် သတိပေး‌ပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်ကျင့်‌တရား အောင်နိုင်မှုကဲ့သို့သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်မှုကို လွတ်မြောက်မှုရဲ့ ပိုပြီး အခြေခံကျတဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့ အောင်မြင်မှုရဲ့ ပိုပြီးရိုးစင်းတဲ့ သဘောသဘာဝတို့နဲ့ ခွဲခြားသိမြင် ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအား ဖြင့်‌ပြောရမယ်ဆိုရင် လွတ်မြောက်မှုကိုယ်၌မှာပဲ သီအိုရီသဘောအရ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် လက်တွေ့ကျင့်သုံးရာမှာ မျှတမှု ရှိရေး အတင်းအကြပ် လုပ်ဆောင်မှုရဲ့ အန္တရာယ်တရပ် ရှိနေမှာ ဖြစ်တယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်မြောက်မှုကို အခြားလွတ်မြောက်မှု အားလုံးအတွက် စိတ်ကျေနပ်စရာ အစားထိုးစရာအဖြစ် လက်ခံခြင်းဟာ ပြုသမျှကို မတုန်မလှုပ်နဲ့ သည်းခံမှုဘက်ကို ဦးတည်သွားမယ့် အန္တရာယ် အသေအချာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်မှုဟာ ပိုပြီးအခြေခံကျတဲ့ လွတ်မြောက်မှုများအတွက် လက်တွေ့ကျတဲ့ စိတ် ဓါတ်ခွန်အားကို အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အဆုံးစွန်လွတ်မြောက်မှုဟာ အလိုဆန္ဒအားလုံးကနေ လွတ် မြောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓရဲ့မိန့်ဆိုမှုတွေဟာ လူအခွင့်အရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်‌ပြောင်းလဲမှုတွေ နဲ့ဆိုင်တဲ့ လွတ်လပ်မှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ မကိုက်ညီဘူးလို့ ငြင်းခုံစရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် အတွင်း မြန်မာသံဃာတော်တွေ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဆို ဆန္ဒပြခဲ့စဉ်က လောင်စာဆီဈေးနှုန်း ရုတ်တရက်မြင့်တက်မှုကြောင့် ကုန်ဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာမှုကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည် သူတွေ စားသုံး နိုင်ဖို့အတွက် သံဃာတော်တွေက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားကို အသုံးချခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသား တွေ လူပီသစွာ နေထိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ အခြေခံရပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်တွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ တူညီ တယ်လို့‌ပြောလို့ မရပါဘူး။
ကျမအထူးတန်ဖိုးထားတဲ့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ကြောက်ရွံ့မှုကနေ ကင်းဝေးမှု ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှု အစပြုခဲ့ကတည်းက ကျမတို့ မြန်မာ့လူ့ဘောင်တခုလုံး အမြစ်တွယ်နေတဲ့ အကြောက်တရား ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို လာရောက်လည်ပတ်သူတွေက မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ နွေးထွေးဖော်ရွကြေတယ်လို့ အလျင်အမြန် မှတ်ချက် ချလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်တွေ ဆွေးနွေးရမှာလည်း ကြောက် တယ်လို့ မှတ်ချက်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုအတွက် စတင်တိုက်ပွဲ ဝင်တဲ့အခါ ကြောက်ရွံ့မှုဆိုတာကို အရင်ဆုံး ကျော်လွှားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးစွန်ထိလည်း ဒီအတိုင်း တသမတ်တည်း သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြောက်ရွံ့မှုလုံး လုံးကင်းဖို့တော့ မလိုပါဘူး။ ရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ သတ္တိရှိရင်ပဲ ရပါပြီ။
အတိုက်အခံတွေအနေနဲ့ ၎င်းတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် ကြောက်စိတ်မရှိ ဟန်ဆောင်နေကြရပြီး ၎င်းတို့၏ ရဲဘော် ရဲဘက်များ ယင်းသို့ ဟန်ဆောင်နေကြသည်ကိုလည်း မမြင်ဟန်ဆောင်နေကြရသည်။ ဒါဟာ လိမ်လည်ဟန်ဆောင်မှု မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အားသစ်လောင်းသွားရမယ့် ခွန်အားသတ္တိ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစိတ်ဓါတ်နဲ့ လွတ်မြောက်မှုအ တွက် တိုက်ပွဲဝင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Akhmatova နဲ့ Ratushinskaya တို့က ရုရှားတွေဖြစ်ပါတယ်။ Henley က အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖိနှိပ်မှုအောက်မှ ရှင်သန်ဖို့နဲ့ ကိုယ့်ကြမ်မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ကြတာတော့ လူမျိုးတိုင်းမှာအတူတူပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကစတင်လာတဲ့ လူသားတွေရဲ့လွတ်မြောက်လိုတဲ့ ဆန္ဒက မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာပါပြီ။
အခြားနိုင်ငံက လူမျိုးစုတွေလိုပဲ မြန်မာလူမျိုးတို့ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်နေကြပါပြီ။ တူနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာ ဆူပူမှုနဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းနဲ့ တူညီမှုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အရေးမကြီးဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ သေးငယ်တဲ့ ကိစ္စ ရပ်တွေက အစပြုဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တူနီးရှားနိုင်ငံမှ သာမန် သစ်သီးသည်တဦးမှ အစပြုကာ တော်လှန်မှုကြီး တရပ်လုံး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများနှင့် ဒေသခံများအကြား လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ အစပြု၍ ဆူပူမှုကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ဝန်စည်စလယ်များစွာ ထမ်းထားရသည့် ကုလားအုတ်တကောင်အဖို့ ကုန်စည်များ ထမ်းထားရစဉ်တွင် ၎င်းတတ်နိုင် သည့် ဝန်ပမာဏအတွင်း မသိသာသော်လည်း ယင်းပမာဏ ကျော်လွန်သွားချိန်တွင် ကောက်ရိုးတမျှင်ပင် ထပ်မံ၍ အတင်မခံနိုင်တော့သည့် အနေအထားမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
တူနီးရှားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် လူငယ်နှစ်ဦး သေဆုံးမှုက ပြည်သူတို့ထမ်းထားရသည် မတရားမှုနှင့် ဖိနှိပ်မှု ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုးကြီးကို ၎င်းတို့သည်းခံနိုင်သည့် ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေပြီးဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြသည့်‌ ကြေးမုံမှန်ကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တူနီးရှားတော်လှန်ရေးတပ်ဦးမှာ လူငယ်များဖြစ်နေခြင်းမှာ ကျမတို့အတွက် အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ချက်အတွက် ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရရေး တောင်းဆိုကြသူများအနက် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တဦးလည်း ပါဝင် ခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း Generation Wave အဖွဲ့၏ အမာခံဖြစ်သည့် လူငယ်အဆိုတော်များမှာ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူအခွင့်အရေး အတွက် အထူး နှစ်မြှုပ် ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအပြီးမှာ ယင်းအဖွဲ့ဝင် အချို့ ထောင်ဒဏ်ကျခံ ခဲ့ရပါတယ်။ ယနေ့တိုင် အကျဉ်းကျခံနေရသူ (၁၅) ဦးရှိပါတယ်။ ယခုအခါ အာဏာ ဖြုတ်ချခံရသည် တူနီးရှားအစိုးရကဲ့သို့ပင် မြန်မာ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်လည်း စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်သော လူငယ်များကို မနှစ်သက်ကြပါ။
အစိုးရက နိုင်ငံအပေါ် သူတို့အုပ်ချုပ်လိုတဲ့ အာဏာအပေါ် ခြိမ်း‌ခြောက်မှု အန္တရာယ်တခုအဖြစ် လူငယ်အဆိုတော်တွေ ကို ရှုမြင်လျှက်ရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုကို ယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက် လူငယ်အဆိုတော်တွေဟာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ တ ဘက်သတ်စည်းမျဉ်းတွေ၊ ဖိနှိပ်မှု၊ မတရားမှုတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်မှုကင်းတဲ့ အနာဂတ်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
တူနီးရှားနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တူညီချက်က လွတ်လပ်မှုကို လိုလားတောင့်‌တနေကြတဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းက ပြည်သူတွေကို ပေါင်းစည်းစေမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနိုင်ငံ (၂) ခုရဲ့ တော်လှန်ရေးရလဒ်ကတော့ ခြားနားပါတယ်။ ပထမဆုံးခြားနား ချက်တခုက မြန်မာစပ်တပ်က ပြည်သူတွေကို ပစ်ခတ်ပြီး၊ တူနီးရှားစစ်တပ်ကတော့ ၎င်းပြည်သူတွေကို ပစ်ခတ်မှုမပြု ခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယခြားနားချက်ဖြစ်ပြီး ရေရှည်အတွက် ပိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ တူနီးရှားတော်လှန်ရေးက ဆက် သွယ်ရေးကွန်ယက်ရဲ့ အကျိုးတရားတွေကို ရရှိခံစားခဲ့ ရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကြောင့် တူနီးရှားပြည်သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုမိုပေါင်းစည်းစေပြီး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်ကပဲ တူနီးရှားနိုင်ငံအပေါ် တကမ္ဘာလုံးရဲ့ အာရုံစိုက်မှု ရရှိစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်ကောင်းမွန်မှုကြောင့် သေဆုံးမှုဖြစ်စဉ် တခုချင်းသာမက ဒဏ်ရာရမှုဖြစ်စဉ် တခုချင်းကိုပါ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ကမ္ဘာကသိအောင် လုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။ ယခုအခါ လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယားနဲ့ ယီမင်နိုင်ငံတို့က တော် လှန်ရေးတွေကြောင့် သူတို့နိုင်ငံက အာဏာရှင်တွေရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ကမ္ဘာကသိအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဆီးရီးယား နိုင်ငံမှာ အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ် လူငယ်အမျိုးသားတဦးကို အသက်သေဆုံးသည်အထိ နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းနေတဲ့ပုံက ဒေါသမီးကို ပိုမိုတောက်လောင်စေခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေဆီက ပြစ်တင်ရှုံ့ချ သံတွေကို ထွက်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးဆိုတာ ချိတ်ဆက်မိခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း တော် လှန်ရေးတွေမှာ လွတ်လပ်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ အခွင့်‌အလမ်းရှိခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
ကျမတို့ အနေနဲ့ တူနီးရှားနဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံတို့ကို အားမကျဘူးလားဆိုရင် အားကျပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လျင်မြန်ငြိမ်းချမ်းစွာ အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့မှုကို ကျမတို့ အားကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားကျနေရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ကျမတို့ လှုပ်ရှားမှုအ တွက် လူသိက်ခာနဲ့ လွတ်လပ်မှုကို တန်ဘိုးထားတဲ့ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအားလုံးရဲ့ စည်းလုံးမှု၊ အားသစ်လောင်း ကတိကဝတ်ပြုမှု လိုအပ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုကို ရှာဖွတေဲ့နေရာမှာ ကျမတို့အနေနဲ့ လွတ်မြောက်ဖို့ လေ့လာသင်ယူ ကြပါတယ်။ ကျမတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှု အတွက် ယုံကြည်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရပါမယ်။ Vaclav Havel ရဲ့ “Living in Truth” (အမှန်တရားဖြင့်‌နေထိုင်ခြင်း) ဖြစ်ပါတယ်။ မလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာ လွတ်လပ်တဲ့ ပြည်သူ တွေ အဖြစ်နေထိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းရာမှာ အတားအဆီး၊ အန္တရာယ်တွေရှိနေပေမယ့် ကျမတို့ ဆန္ဒအလျှောက်တာ ဝန်ထမ်း ဆောင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့အနေနဲ့ မှန်ကန်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အရာကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်‌ ရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုဟာ ပိုမိုလွတ်လပ်မှုတွေအတွက် အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တယ်လို့လဲ ယူဆထားပါတယ်။
NLD ရုံးချုပ်ကိုလာရောက်ပြီး လစာမရတဲ့အလုပ်တွေကို လာရောက်လုပ်ကိုင်ပေးနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့ လူ ငယ်များဟာ လွတ်မြောက်ခွင့်‌ရရေးခရီးကြမ်းအတွက် ၎င်းတို့၏ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်‌ အတိုင်း ဆောင်ရွက်နေကြတာ ဖြစ် ပါတယ်။
ယနေ့ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ပြောကြားမှုဟာလည်း ကျမရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဆက်သွယ် ပြောဆိုပိုင်ခွင့်‌ကို ကျင့်‌သုံးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျပြောရရင် ကျမ ကို ကျမ ပိုမိုလွတ်လပ်တဲ့ လူတဦးအဖြစ် ခံစားမိစေတဲ့ အခွင့်‌အရေးကို ကျင့်‌ သုံးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အတိုက်အခံလုပ်တယ် ဆိုတာ Max Weber ရဲ့ နိုင်ငံရေးအမြင်အရ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းတခု ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျမတို့အနေနဲ့ လွတ်မြောက်မှုအတွက် အတိုက်အခံလုပ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကို ခုံမင်မြတ်နိုး စိတ်၊ တာဝန်သိစိတ်၊ ချင့်‌ချိန်တတ်မှုတို့နှင့်‌အတူ ထပ်ခါတလဲလဲ ကြိုးပမ်းကြဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ကျမတို့ရဲ့ လွတ် မြောက်ရေး အိပ်မက်ကို အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။
ဒီနေ့ပို့ချမှုကို ကျမနှစ်သက်တဲ့ Kipling ရဲ့ သီချင်းစာသားအချို့နဲ့ အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ ဒီစာသားတွေရဖို့ ကျမကို အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ Tim Garton-Ash ကို ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်။
“I’d not give room for an Emperor – I’d hold my rood foraKing. To the Triple Crown I’d not bow down – but this isadifferent thing. I’ll not fight with the Power of Air – sentry, pass him through! Drawbridge let fall – He’s the lord of us all – the Dreamer whose dream came true!”
SUE LAWLEY – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဒီသင်ခန်းစာကို မကြာသေးမီက အသံသွင်းပေးခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့က သူမရဲ့အသံကို အခုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှင် ပရိသတ်ရဲ့ လက်ခုပ်သံကို ကြားလိုက်ပါသလား။
အောင်ဆန်းစုကြည် – ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
SUE LAWLEY – ပရိသတ်ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ‌ဖြေကြားဖို့ အသင့်ဖြစ်ပါပြီလား။
အောင်ဆန်းစုကြည် – ဟုတ်ကဲ့၊ မေးခွန်းကောင်းတွေကို ဖြေကြားပေးပါမယ်။
SUE LAWLEY – ကျမနဲ့အတူ နိုင်ငံရေးနဲ့ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ တင်ဆက်သူ Tim Garton-Ash လည်း ရှိနေပါ တယ်။ Tim အနေနဲ့ အရှေ့ဥရောပ ကွန်မြူနစ်စနစ်ကနေ ယနေ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံအထိ အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အတိုက် အခံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးသားမှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့နဲ့အတူ ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံ ရေးရာ လက်ထောက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား Sir Kieran Prendergast လည်း ရှိနေပါတယ်။
ယခုအခါ Sir Kieran အနေနဲ့ ဂျီနီဗာအ‌ခြေစိုက် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ဗဟိုဌာနမှာ အကြံပေးအရာရှိအနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက် ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တရုတ်၊ အီဂျစ်၊ အီရန်၊ ဆီးရီးယားနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ က နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ အတိုက်အခံတွေ၊ အစီအစဉ် တင်ဆက် သူတွေလည်း ရောက်ရှိနေပြီး သူတို့ဆီက မေးခွန်းတွေ ထွက်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပထမဆုံး မေးခွန်းမေးဖို့ Timothy Garton-Ash ကို ဖိတ်ခေါ် ပါတယ်။
Timothy Garton-Ash – ပထမဆုံးအနေနဲ့ အရမ်းပြောင်မြောက်တဲ့ သင်ခန်းစာ ပို့ချပေးတဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
ကျနော်အနေနဲ့ ဒီမေးခွန်းက မေးခွန်းကောင်းတခုဖြစ်မယ်လို့ သိပ်မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တူနီးရှားနိုင်ငံနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ခဲ့တဲ့အပေါ် အနည်းငယ် မေးမြန်းလိုပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတည်း ကစပြီး နှစ်ပေါင်း (၂၅) နှစ် နီးပါးကြာတဲ့အထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ အတိုက်အခံကြိုးပမ်းမှု ဘာကြောင့် ဒီလောက်အချိန်ကြာ ရတယ်ဆိုတာ မေးမြန်းလိုပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်ကြာမြင့်‌ရတာဟာ မြန်မာစစ်တပ်က ပြည်သူတွေကို သေဆုံးအောင် ပစ်ခတ်လို့လား၊ အကြမ်းမဖက်အတိုက် အခံပြုလုပ်မှုမှာ အချိန်ယူရန် လိုအပ်လို့လား၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆက်သွယ်ရေးတော်လှန်မှု မထွန်းကားနိုင်သေးလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ တူနီးရှားနိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်တဲ့ ဥရောပ ရှိသလို မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အိမ်နီးချင်း တရုတ် နိုင်ငံရှိနေလို့လား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့အတိုက်အခံ လှုပ်ရှားမှု ဒီလောက်အချိန်ကြာမြင့်ပြီး ခက်ခဲနေရတဲ့ အ ကြောင်းအရင်းများကို သိရှိလိုပါတယ်။
အောင်ဆန်းစုကြည် – ဒါတွေအားလုံးကြောင့်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပထမဆုံးအကြောင်းအရင်းကို ပြောရရင် ကျမ တို့ မြန်မာစစ်တပ်က ပြည်သူတွေကို ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်တခုက ဒီလိုလုပ်ဆောင်လိုက်ရင် အ ချိန်ကာလတခုအထိတော့ နောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ရပ်တန့်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာတင် မဟုတ်ပါ ဘူး၊ တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဟန်ဂေရီတော်လှန်ရေး နှိမ်နင်းခံရပြီးတဲ့နောက် အရှေ့ ဥ ရောပက ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြဖို့ တွေဝေလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေး တော်လှန်မှုကတော့ အများကြီး အပြောင်းအလဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကျမ ထင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံတိုင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အ‌ခြေအနေက ပိုမိုဆိုးရွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေက ဒီအ‌ခြေအ နေကို မသိကြပါဘူး။ ပထဝီနိုင်ငံရေး အနေအထားတွေ ထည့်‌သွင်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုတာလဲ မှန်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ ကို ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးကို သိရှိအောင်မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းက ကျမတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ကြာမြင့်‌စေခဲ့တာပါ။ အဲဒါကြောင့်တင်ရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာလှုပ်ရှားလိုတာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ တူနီးရှားနဲ့ အီဂျစ်တို့မှာလည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြီးဆုံးသွားလို့ပါပဲ။
SUE LAWLEY – Nelson Mandela ကတော့ သူ့ကိုယ်သူ ပြောင်းလဲခဲ့တယ်နော်၊ မဟုတ်ဘူးလား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြမ်းမဖက်တာကို နည်းဗျူဟာတရပ်အနေနဲ့သုံးတာဟာ ရေရှည်မှာ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ သူကပြောခဲ့တယ်နော်၊ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်စရာတစုံတခုများ ရှိနေသလား။
အောင်ဆန်းစုကြည် … အဲဒါကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျမ သင်ခန်းစာ ပို့ချတဲ့အထဲမှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ အတိုင်း အကြမ်းမဖက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ကျင့်‌ဝတ်တခုအနေနဲ့ ကျမကိုင်ဆုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ အချက်တခုအနေနဲ့ရော နိုင်ငံရေးအနေအထားတရပ် အနေနဲ့ပါ နိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းမဖက်ဝါဒရဲ့ ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဂန္ဒီတောင်မှ ပြောကြားခဲ့တဲ့အချက်တချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါက တော့ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ သတ္တိနည်းပါးမှုဟာ ကြားအ‌ခြေအနေမှာရှိပြီး အကြမ်းဖက်မှုကို သူ့အနေနဲ့ အချိန်မရွေး ရွေး ချယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
SUE LAWLEY – ကျမတို့နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တဦးဖြစ်တဲ့ ဝေနှင်းပွင့်‌သုန် လည်း အတူရှိနေပါတယ်။ သူမ က အခုလန်ဒန်မှာ ကျောင်းတတ်နေပြီး သူမရဲ့ဖခင်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ မေးခွန်းမေးမြန်းဖို့ ဖိတ်ကြားပါရစေ။
ဝေနှင်းပွင့်‌သုန် – ဟုတ်ကဲ့၊ မင်္ဂလာပါအမေ။ မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ မေးမြန်းလိုပါတယ်။ ကျမတို့ အားလုံး လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်လိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်ဖို့၊ ပိုမိုတိုးတက်မှုရရှိဖို့၊ လူငယ်တွေ အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လက်တွေ့ဆန်တဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာဆိုတာ ကျမအနေနဲ့ သိရှိလိုပါတယ်။
SUE LAWLEY – မြန်မာနိုင်ငံအပြင်ဘက်မှာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မယ်လို့ ဆိုလိုတာလား။
ဝေနှင်းပွင့်‌သုန် – ဟုတ်ကဲ့။
SUE LAWLEY – မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက ကျောင်းသားတွေက လုပ်မှာလား။
ဝေနှင်းပွင့်သုန် – မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပကပဲ ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကပဲ ဖြစ်စေ လူငယ်တွေ လုပ်ဖို့ပါ။ အကောင်းဆုံး လက်တွေ့ကျတဲ့ လုပ်ငန်းတရပ်အဖြစ် ကျမတို့ ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲ။
SUE LAWLEY – ဒေါ်စု ပြောပေးပါဦး
အောင်ဆန်းစုကြည် … လက်တွေ့ကျတဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုဆိုတာ တခုထဲ ရှိတယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပက လူငယ်အားလုံးအတွက် ဆိုရင်တော့ ပြည်တွင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မျက်ခြေမပြတ်ဖို့ အလွန်ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါက သူတို့ အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင် နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက လူငယ်တွေအ တွက်ကတော့ လုပ်နိုင်တာတွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ နေရာကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာ အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။ ပြည်တွင်းက လူငယ်တွေမှာ လွတ်မြောက် ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရတာ အခက်အခဲရှိပါတယ်။ လက်တွေ့ပိုင်းအရ ရော၊ သီအိုရီပိုင်းအရရော သူတို့ကို သူတို့ ပညာပေးဖို့ ကြိုးစားရပါတယ်။ တခြားလူတွေကိုလည်း လှုပ်ရှားမှုမှာ သူတို့နဲ့ အတူ ပါဝင်လာဖို့ ပညာပေးလှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့ သင်ယူရပါတယ်။
SUE LAWLEY – Sir Kieran Prendergast ရဲ့ အမြင်ကို မေးပါရစေ။ NLD ရဲ့ ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကတည်းက ပုံစံမပြောင်းလဲဘဲ ရှိနေခဲ့တာ ပြောင်းသင့်‌တယ်လို့ ထင်မြင်ပါ သလား။
Sir Kieran Prendergast – ‌တခါတလေ ကျနော်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးမိပါတယ်။ မူဝါဒတွေဟာ အပြောင်းအလဲ မရှိ ငြီးငွေ့စရာ ဖြစ်နေသလားပေါ့။ အထူးသဖြင့်‌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့ ပြင်ပကမ္ဘာကို အကြံပေးတဲ့အခါ ကျနော်တို့ ကျင့်‌သုံးနေတဲ့ မူဝါဒ (၄) ခုပဲ ရှိပါတယ်။ တခုက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ဒုတိယက ပစ်ပယ်ထားတာ၊ ဒါပေ မဲ့ ကျနော် သိသလောက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံက ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်းက သူ့သဘောနဲ့သူ သီးခြားနေခဲ့တာပါ။ တတိယ က အရေးယူပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ဗြောင်ကျကျ လုပ်ဆောင်နေ ပါတယ်။ နံပါတ် (၄) နည်းလမ်းက တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ မူဝါဒနဲ့သော် လည်း ကောင်း၊ စစ်ရေးအားဖြင့်‌သော်လည်းကောင်း ပိုမိုအောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ မှားယွင်းစွာ ယူဆခဲ့မှုတွေ အပြီးမှာတော့ ဒါဟာ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် NLD အနေနဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုဆိုတဲ့ နယ်ပယ် (၂) ခုကိုပဲ တွေးစရာရှိတာလား၊ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုကရော လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို မဆောင်ကျဉ်းပေး တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံလို နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲ ဖြစ်မနေစေဘူးလားလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဥပမာ-NLD အနေနဲ့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် စံသတ်မှတ်နိုင်သလား၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗီယက်နမ်နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားတို့လို စစ်ဘက်အုပ် ချုပ်မှုအောက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ တံခါးပိတ်ဝါဒနဲ့ နေလာကြတဲ့နိုင်ငံတွေကို ထည့်‌သွင်းစဉ်းစားကြည့်‌မယ်ဆိုရင် စစ် ဘက်ဆိုင်ရာကို ဒီအတိုင်း ဆက်လက်မနေဘဲ၊ တံခါးဖွင့်‌ဝါဒကျင့်‌သုံးဖို့ကို သာယာဝပြောမှုရှိနဲ့ အနောက်နိုင်ငံများရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
SUE LAWLEY – ဒေါ်စု… ရှင့်‌ကိုတော့ ဝိုင်းတိုက်ခိုက်နေကြပြီနော်။ ဒါဟာ မေးခွန်းကောင်း တခုတော့ မဟုတ်ဘူး။
အောင်ဆန်းစုကြည် – ကျမ ပြန်ဖြေနိုင်တဲ့အတွက် ဒီမေးခွန်းက သိပ်တော့မဆိုးလှပါဘူး။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Sir Kieran ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းလမ်း (၄) သွယ်က သူပြောသလိုတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျမတို့အနေနဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့ အစဉ်အမြဲဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမလုပ်ဘဲ ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့အနေနဲ့ တံခါးပိတ်ဝါဒကို အယုံအကြည် မရှိပါဘူး။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ Blanket Sanction (အလုံးစုံ ပိတ်ဆို့ရေး) မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံကသာ အလုံးစုံပိတ်ဆို့ရေးချမှတ် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပသမဂ်ဂနဲ့ အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေကတောင် အလုံးစုံပိတ်ဆို့မှု မလုပ်ပါဘူး။ ဒါတွေ အားလုံးကို အလုံးစုံပိတ်ဆို့မှုလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ ထိရောက်မှုရှိ/မရှိဆိုတာနဲ့ ပတ်သက် လို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအနေနဲ့ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေ ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ လွှတ်တော်ကနေတဆင့်‌ တောင်းဆိုထားတာကို ပြန်လည် သတိပေးလိုပါတယ်။ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ ထိရောက်မှုမရှိရင် သူတို့အနေနဲ့ ဘာကြောင့် ပယ်ဖျက် ပေးဖို့ တောင်းဆိုမှာလဲ။ ဒါကိုထည့်‌သွင်းစဉ်းစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ စေ့စပ် ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီမိုကရေစီ ကွန်ယက်အတွက် ကျမတို့ကို အထောက်အကူဖြစ်မဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက အောင်မြင်မှုရရှိနေပါတယ်။ ကျမ လွတ်မြောက်လာကတည်းက ကျမ မျှော်လင့်‌ထားတာထက် ပိုမို အောင်မြင်နေပါတယ်။ ပြည်သူတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်‌အာဏာပိုပေးပြီး အစိုးရအပေါ် မှီခိုနေရမှု လျော့ချပေးခြင်းဖြင့်‌ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကို နည်းလမ်းသစ်တရပ်အနေဖြင့်‌ အင်တိုက်အားတိုက် ကူညီပေးရာရောက် ပါတယ်။
SUE LAWLEY – မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိသျှသံအမတ်ကြီးဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ Vicky Bowman ကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ သူမဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်‌နှစ်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗြိတိသျှသံတမန်တဦးအနေဖြင့်‌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတဦးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
Vicky Bowman – ကျမရဲ့မေးခွန်းက အတိုက်အခံတွေကြားထဲမှာ သဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ အာဏာ ရှင်အစိုးရတွေရဲ့လက်အောက်က အတိုက်အခံလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်တွင်းအတိုက်အခံတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ရာမှာ အခက်အခဲရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက အတိုက်အခံလှုပ်ရှားမှုမှာလည်း အလားတူပြဿနာမျိုး ရှိတယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ ပြိုကွဲနေမှုတွေကို ပြန်လည်ပေါင်းစည်းပေးနိုင်တဲ့ မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ် (သို့) ခိုင်မာတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံထက်စာ လျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမရဲ့မေးခွန်းက အာဏာရှင်အ စိုးရတွေ လက်အောက်က အတိုက်အခံလှုပ်ရှားမှုတွေအနေနဲ့ တဦးချင်း တယောက်ချင်း လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်လှုပ်ရှား နိုင်ဖို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါတီလို အတိမ်းအစောင်းမဖြစ်စေဖို့ ဘယ်လိုမျိုး ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင် သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အောင်ဆန်းစုကြည် – လူအတော်များများက NLD သက်တမ်း ဘယ်လောက် နုသေးတယ်ဆိုတာကို မေ့နေကြတယ် ထင်ပါတယ်။ သာဓကအားဖြင့်‌ အိန္ဒိယ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ကာလအတွင်း အိန္ဒိယ အမျိုးသားကွန် ဂရက် (သို့) အာဖရိက အမျိုးသား ကွန်ဂရက်တို့လို သက်တမ်း ကြာမြင့်‌ပြီဖြစ်တဲ့ ပါတီကြီးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝဆိုတာ ခက်ခဲတဲ့အတွက် အတိုက်အခံတွေအကြား သဘောထားကွဲလွဲတယ်ဆိုတာ ပုံမှန် သဘာဝသာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျမတို့အနေနဲ့ ကြိုးစားရုန်းကန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာတွေကို ‌ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လူတွေအကြားမှာ တဦးနဲ့ တဦး အမြင်မတူညီမှုတွေနဲ့ စတင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတယောက်တည်း (သို့) ခေါင်းဆောင်အနည်းစုအပေါ် မှီခို ရတယ်ဆိုတာ သဘာဝမကျပါဘူး။ ဒီလိုသဘောသဘာဝမျိုးက သက်တမ်းနုသေးတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာသာ ဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ကျမတို့ အနေနဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော် ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ ကျမတို့လို အခြားလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် သက်တမ်းနုနေဆဲ၊ သင်ယူနေရဆဲသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမမျိုးဆက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒုတိယမျိုးဆက်ကို ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ ပိုမို ကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယမျိုးဆက် မရောက်ခင် ဒီမိုကရေစီရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
SUE LAWLEY – ဒေါ်စု.. ရှင်က လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၂) နှစ်ကထက်စာလျှင် ပိုမိုအားကြီးခိုင်မာတဲ့ အနေအထားကို ရောက်နေ ပြီလို့ မခံစားရဘူးလား။ နိုဝင်ဘာလအတွင်း စစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကို ကြေညာပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် လွတ်မြောက်ခဲ့စဉ်က အခုလိုမျိုး အနေအထားမရှိသေးဘူးလို့ ကျမထင်ပါတယ်။
အောင်ဆန်းစုကြည် … ဟုတ်ပါတယ်။ ကျမအခုပိုပြီးတော့ ခွန်အားတွေရနေပါပြီ။ သူတို့ (အစိုးရ) အနေနဲ့ တော့မသိပါ ဘူး။ ကျမ အနေနဲ့ကတော့ သွေးသစ် (မျိုးဆက်သစ်) တွေ ရလာတဲ့အတွက် ပိုပြီးအားကောင်း လာတာသေချာပါ တယ်။ NLD ကို ထောက်ခံတဲ့ လူငယ် ဒီလောက်များများကို ကျမ တခါမှ မမြင်ဖူးပါဘူး။ သူတို့က NLD အဖွဲ့ဝင်တွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ဒီအချက်ကိုပဲ ကျမ တကယ်နှစ်ခြိုက်တာပါ။ ပါတီဝင် မဟုတ်ပေမဲ့ ကျမတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို တကယ့် ကို တက်တက်ကြွကြွ စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ ထောက်ခံနေကြပါတယ်။ ခေတ်သစ်ပညာရေးကို လက်လှမ်းမီသူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၁၉၈၈ မျိုးဆက်လူငယ်တွေထက် အများကြီးပိုမိုအရည်အချင်း ပြည့်‌စုံကြပါတယ်။ အဲဒီ အချက်က ဆက်သွယ်ရေးတော်လှန်မှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ မဟုတ်ပေမဲ့ ခိုင်မာတဲ့အနေအထားတရပ်ကို ရရှိနေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
SUE LAWLEY – လူ့အခွင့်‌အရေးအဖွဲ့တခုအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီး ၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီလ အဓိကရုဏ်းအတွင်း အီဂျစ်နိုင်ငံ၊ Tahrir ရင်ပြင်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံသား Heba Morayef ကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Heba Morayef – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ တာဝန်ဝတ်တရားတွေအပေါ် ဘယ် လိုထင်မြင်ယူတယ်ဆိုတာ သိလိုပါတယ်။ အီဂျစ်ပြည်သူတွေ မူဘာရက်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်း အရင်းတခုက မူဘာရက်အစိုးရအပေါ် အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပသမဂ်ဂက ချွင်းချက် မရှိထောက်ခံထားခဲ့လို့ဖြစ်ပြီး အဲဒီ အတွက် ဆန့်ကျင်တဲ့ဒေသခံတွေကို ဖြိုးခွဲနှိမ်နင်းခြင်း ခံရခဲ့ပါတယ်။
နောက်မေးခွန်းတခုကတော့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ထောက်ခံမှုက ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ အကန့်အ သတ်အထိ ရှိသင့်‌တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ လစ်ဗျားနိုင်ငံမှာ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းခံနေရတဲ့အတွက် ဒေသခံတွေ အကြား ပိုမိုရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဘာရိန်းနိုင်ငံလို အခြားတိုင်းပြည်တွေမှာကြတော့ နိုင်ငံတကာရဲ့ ဝေဖန်မှုမခံရဘဲ ပြည်သူတွေအပေါ် နှိမ်နင်းမှုတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
အောင်ဆန်းစုကြည် … ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာက လူဆိုတာ အာဏာရဲ့ကျေးကျွန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးသားတဲ့ ပြည်သူတွေကို အာဏာရ အစိုးရတွေက ချွေးသိပ်လိုက်တာနဲ့ ပြည်သူများက စိတ်ပျော့ သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေမှာလည်း ဒီဖြစ်ရပ်ကို တွေ့ရပါတယ်။ အတိုက်အခံတွေအတွက် အာဏာနဲ့ လွှမ်းမိုးမှုက ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျမတို့ မှာ အာဏာမရှိပါဘူး၊ အာဏာရှိတဲ့သူတွေက အကြောင်းရှိလို့ အာဏာရှိနေတယ်လို့ လူတွေက ယူဆချင်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ တကယ့်ကို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းခံတွေကြောင့် အာဏာရနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမတို့ လုပ်ရမှာက မထောက်ခံသင့်‌တဲ့ သူကို ထောက်ခံရင် ရေရှည်မှာ ဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေကို အသိပညာပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဂျစ်နိုင်ငံဟာ အခုချိန်မှာ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံး အနေအ ထားမှာ ရှိပါတယ်။
SUE LAWLEY – နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘယ်လောက် စိတ်ပျက် နေပါပြီလဲ။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်၊ လုပ်ဆောင် သင့်‌တယ်လို့ ထင်ပါ သလား။
အောင်ဆန်းစုကြည် … ကျမအနေနဲ့ စိတ်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသုံးချင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတ ကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အချို့လုပ်ရပ်တွေက အရမ်းကို အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။ သာဓကအားဖြင့်‌ အမေရိကန်အနေ နဲ့ အရမ်းကို အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ကျမတို့ ငြင်းပယ်လို့ မရပါဘူး။ ထို့အတူပဲ ဥရောပသမဂ္ဂ အ နေနဲ့လည်း အရမ်းကိုအထောက်အကူ ပေးခဲ့ပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်တောင် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအရေး အတွက် အထောက်အပံ့ပေးဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ စတင်သိမြင်လာကြပါပြီ။
SUE LAWLEY – ဒါပေမဲ့ တရုတ်၊ အိန်ဒိယနဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံတွေက မြန်မာအစိုးရရဲ့ အဓိက ကုန်သွယ် ဘက်နိုင်ငံကြီး တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်ဆန်းစုကြည် … ဟုတ်ပါတယ်။ အဓိကကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်‌ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိနိုင်ငံတွေက မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဆက်စပ်စရာတွေများတဲ့အတွက် သူတို့ကို ခဏလောက် ဘေးဖယ်ထားချင်ပါ တယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံကတော့ အာဆီယံနိုင်ငံလည်း ဖြစ်တယ်၊ တနိုင်ငံချင်း နာမည်တပ်မပြောချင်ပေမဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံ တွေအနေနဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ကျမ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် မကျခံခင်က အ‌ခြေအနေထက်စာရင် ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ် လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
SUE LAWLEY – Timothy Garton-Ash အနေနဲ့ရော ဘာများဖြည့်‌စွက် အကြံပြုချင်ပါလဲ။
Timothy Garton-Ash – အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာကို သတိပေးပါ ရစေ။ ဂန္ဒီရဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ လွတ်လပ်မှုအတွက် အကြမ်းမဖက် အနုနည်းနဲ့ လှုပ်ရှားမှုအပေါ် ပိုမို ထောက်ခံမှုပေးသင့်‌တယ်လို့ မထင်ဘူးလား။
အောင်ဆန်းစုကြည် – သေချာတာပေါ့။ ကျမလည်း ဒီလိုပဲ ယူဆပါတယ်။ အိန်ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ မဟာဗျူဟာအကျိုးစီးပွားတွေကို ရှေ့တန်းတင်တာထက် ဒီမိုကရေစီစည်းမျဉ်းတွေမှာ နက်နက်နဲနဲ ပါဝင်သင့်‌တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
SUE LAWLEY … Sir Kieran Prendergast အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာပြောချင်ပါသလဲ။ ကုလသမဂ္ဂ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူတွေကို တကယ်ထိရောက်စွာ ကူညီနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိဘူးလား။
Sir Kieran Prendergast – ‌ပြဿနာက လုံခြုံရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေကို လုံခြုံရေး ကောင်စီက ချမှတ်ပြီး ရုရှားနဲ့ တရုတ်တို့က လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဗီတိုအာဏာရထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်က ကြည့်‌ရင်လည်း ၎င်းရဲ့ မဟာဗျူဟာအကျိုးစီးပွားကို ကျောခိုင်းလို့ မရပါဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက ၎င်းရဲ့ မဟာဗျူဟာ အ ကျိုးစီးပွားကို လွှဲပြောင်းပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံကလည်း အခုအချိန်မှာ လျော့တွက်လို့ မရပါဘူး။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ကျနော် ကုလသမဂ္ဂမှာ လုပ်ကိုင်စဉ်က လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာနိုင်ငံအရေး ဆွေးနွေးတာ မရှိသေးပါဘူး။ ပြည်တွင်းရေး ကိစ္စရပ်လို့ပဲ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လုံခြုံရေးကောင်စီ ရဲ့ ဆွေးနွေးစရာကိစ္စရပ်တခု ဖြစ်လာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ တဖြည်းဖြည်း ဆွေးနွေးနေသော်လည်း မည်သည့်‌အတိုင်းအတာအထိ သွားမည်ကို ကန့်သတ်ချက်လေးတွေ ရှိနေပါတယ်။
SUE LAWLEY – တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကုန်သွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ အနည်းငယ် အ ရှက်ရနေပြီလို့ ရှင်ပြောခဲ့တယ်နော်။
Sir Kieran Prendergast – စစ်အစိုးရက အင်အားသုံးတဲ့အပြုအမူတွေကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ အနည်းငယ်အရှက်ရနေ တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားက အရှက်တရားကို အနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်။
အောင်ဆန်းစုကြည် … ဒီနေရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကုလသမဂ္ဂတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်ချက်တခု ချလိုပါတယ်။ တရုတ်နိုင် ငံအနေနဲ့ နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ KIA အကြား ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အနေအထားတွေအပေါ် အလွန်ပဲ စိုးရိမ်မ ကင်း ဖြစ်နေပါတယ်။ အခုဆိုရင် မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတွင်း တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီလို့ တရုတ် နိုင်ငံက ပြောလာပါပြီ။ တည်ငြိမ်မှုကို ဖိနှိပ်မှု (အထူးသဖြင့်‌ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှု) ကတဆင့်‌ မရနိုင်ဘူးဆိုတာ တ ရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြင်စပြုလာပါပြီ။ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ပတ်သက်လို့ပြောရရင် လုံခြုံရေးကောင်စီအပြင် ကုလသမဂ္ဂတခုလုံး လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သာဓကအားဖြင့်‌ ယခင် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း တဦး ဖြစ်တဲ့ Perez de Cuellar အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ကုလသမဂ္ဂလမ်းညွှန်မြေပုံအပေါ် တင်နိုင်ဖို့ လုပ်နိုင်သမျှ လုပ်ခဲ့ပါ တယ်။ လက်ရှိ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ ရုံးအဖွဲ့အနေနဲ့ ၎င်းတို့ဆန္ဒရှိရင် ဒီနည်းအားဖြင့်‌ မြန်မာနိုင်ငံကို ကူညီ နိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
SUE LAWLEY – ဒါ ရှင်ပေးချင်တဲ့ သတင်းစကားလား။ ဒီအကြောင်းအရာက ကျမတို့ ပရိသတ်တဦး မေးချင်နေတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းကို ပေးချင်တဲ့ သတင်းစကားကို သိလိုပါတယ်။
အောင်ဆန်းစုကြည် – အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ ၎င်း၏ ရုံးအဖွဲ့လုပ်နိုင်တဲ့ အရာမှန်သမျှကို အမြန်ဆုံးလုပ် ဆောင်သင့်‌တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
SUE LAWLEY – Sir Kieran Prendergast အနေနဲ့ အနည်းငယ် ဖြည့်‌စွက် အကြံပြုစေလိုပါတယ်။
Sir Kieran Prendergast – အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရံဖန်ရံခါ သွားရောက်လည်ပတ် မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်အနေနဲ့ပြောရရင် ပိုမိုတိုးတက်မှုရှိတဲ့ ဆွေးနွေးမှုအတွက် လမ်းပွင့်‌ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ အလွန် စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ သာဓကအားဖြင့်‌ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို လမ်းဖွင့်‌လိုက်ရင် အကျိုးအမြတ်တွေ ရလာစေဖို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က တယောက်ယောက်ကို ခေါ်သွားဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမေရိကန်အစိုးရက အဲလိုခေါ်သွားရင် အမေရိကန်အနေနဲ့ ရှုံး နိမ့်သွားမယ်ဆိုပြီး ဖိအားပေးလာတဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ ရန်ပုံငွဆေုံးရှုံးသွားမှာစိုးလို့ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဘယ်သူပဲ သွားသွား ဖြန့်ဝေချထားနိုင်တဲ့ ယန္တရားတွေ ရှိသင့်ပါတယ်။
SUE LAWLEY – Geoffrey Alan ကို ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ ဆက်သွယ်မှုတော်လှန်ရေးနှင့် ပတ်သတ်လို့ မေးမြန်းလို ပါတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အခုလို စကား‌ပြောခွင့်ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက ဖြစ်စဉ်တွေ ခြားနားမှု ရှိတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားခဲ့တဲ့ အပေါ် ကျနော် အထူး စိတ်ဝင် စားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဆက်သွယ်ရေး တော်လှန်မှုကို ဘယ်လိုအသုံးချ ဖို့ စီစဉ်ထားပါသလဲ။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်ပက သတင်းအချက်အလက်တွေကို ရနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေ တွေ့ နေပါပြီလား။
အောင်ဆန်းစုကြည် … ကျမ အခုပဲ ဒီနည်းလမ်းသုံးပြီး ရှင်နဲ့ စကား‌ပြောနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်း ငယ်ကဆိုရင် ကျမ ဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ အစိုးရက ကျမရဲ့တယ်လီဖုန်းလိုင်းကို ဖျက်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကျမကို ကမ္ဘာနဲ့အဆက်အသွယ် ဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
SUE LAWLEY – မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ အ‌ခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက လူငယ်တွေလိုပဲ မို ဘိုင်းလ်ဖုန်း၊ Twitter အစရှိတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်တွေ သုံးနိုင်နေပါပြီလား။
အောင်ဆန်းစုကြည် … မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းထက်စာရင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် ကွန်ပြူတာ သုံးစွဲမှု အများကြီး နည်းနေသေးတဲ့အတွက် ဒီအတိုင်းအတာထိတော့ မရောက်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျမ လွတ်မြောက်တဲ့နေ့က သတိ ထားမိတဲ့ ခြားနားချက်တခုက ကျမရဲ့နေအိမ်ဂိတ်ဝမှာ လာရောက် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာ ဟန်းဖုန်းတွေကို တွေ့မြင်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ကဆိုလျှင် ကျမရဲ့ လုံခြုံရေးအရာရှိတွေကလွဲရင် ဟန်းဖုန်းကို ကျမ မမြင်ခဲ့ရပါဘူး။
SUE LAWLEY … ၂၀၀၇ ခုနှစ် သံဃာတော်တွေ ဆန္ဒပြအုံကြွတဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ကာလက မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ ပေါ်မှာ ဆန္ဒပြတဲ့ပုံတွေ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အီဂျစ်နိုင်ငံ Tahrir ရင်ပြင်မှာ မြင်တွေ့ခဲ့ရသလို ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လို ထင်ပါသလဲ။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အလုံအလောက်မရှိလို့ ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါသလား။
အောင်ဆန်းစုကြည် … အဲဒီအချိန်တုန်းက မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေ အလုံအလောက်မရှိသေးဘူးလို့တော့ ပြောသံ ကြားပါ တယ်။ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကာလ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီလိုပုံကိုလည်း မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ ရေဒီယိုက သတင်းတွေဘဲ ကြားခဲ့ရတာပါ။ ရေဒီယိုသတင်းတွေကလည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုပေမယ့် ရုပ်ပုံတွေလောက်တော့ အကျိုးသက်ရောက် မှု မရှိပါဘူး။
SUE LAWLEY … ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်‌ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းမယ့် Cara Bleiman ကို ဖိတ်ခေါ် လိုပါတယ်။
Cara Bleiman … ယခုလိုစကားပြောခွင့်‌ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ ကျနော်တို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာလှည့် ခရီး သည်အနေနဲ့ လာရောက်သင့်ပါသလား၊
အောင်ဆန်းစုကြည် … ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကို အစိုးရနဲ့ အပေါင်းအပါတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေကို ရှောင်ရှားကြဖို့ ပြောကြားလိုပါတယ်၊ မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရာမှ ကူညီပေးနိုင်မဲ့ အစီအစဉ်တွေ ပါဝင် တဲ့နေရာတွေကို သွားရောက်အသုံးပြုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်၊ ဒီလို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အစီအစဉ်တွေကို လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အေဂျင်စီတွေနဲ့ ဟိုတယ်များစာရင်းကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေပါတယ်၊ မကြာခင်ပြီး မယ်လို့ မျှော်လင့်‌ရပါတယ်။
SUE LAWLEY- ရန်ကုန်မြို့လယ်က ဟိုတယ်ကြီးတွေကိုသွားရင် အစိုးရအပေါင်းအပါတွေရဲ့ အိတ်ထဲကို ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေရဲ့ငွေတွေ ရောက်သွားမယ်လို့ပြောချင်တာလား။
အောင်ဆန်းစုကြည် … ဟိုတယ်ကြီးများအားလုံးကို အစိုးရအပေါင်းအပါများကသာ ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး၊ အများစုကိုတော့ သူတို့က ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေအနေနဲ့ ဘယ် ဟိုတယ်မျိုးကို အားပေးသင့်‌ တယ်၊ ဘယ်ဟိုတယ်မျိုးကို အားမပေးသင့်ဘူးဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်လို့ စာရင်းတခု ပြုစုနေပါ တယ်။
SUE LAWLEY- အီရန်နိုင်ငံက Rouhi Shafii ကို ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။
Rouhi Shafii … ဂျီနီဗာမှာပြုလုပ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်‌အရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးပွဲကို မကြာသေးမီက တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီ့အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံက NGO အမျိုးသမီးတဦးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ဖို့ ငြင်းဆန်တာထက် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေ နဲ့ ဘာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ခြင်းမပြုခဲ့သလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အောင်ဆန်းစုကြည် … ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း (၃) ခုရှိပါတယ်၊ ပထမအချက်က ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်ဆိုရင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ထောက်ခံတယ်လို့ လက်မှတ်ရေးထိုးရ ပါမယ်၊ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက စစ်တပ်ကို အစိုးရအာဏာတွေအားလုံးမှာ လိုအပ်သလို ပါဝင်အုပ်ချုပ်နိုင်ခွင့်‌ ပြု ထားပါတယ်၊ ဒုတိယအချက်ကတော့ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ပါတီဝင်အားလုံးကို ဖယ်ချန်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ကျမတို့ လက်မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ချင်ရင် ခံယူချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ ကျမတို့ ပါတီဝင် တွေကို စွန့်လွှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်နေပါတယ်၊ တတိယအချက်ကတော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်မှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျမတို့ ပယ်ဖျက်ရပါမယ်၊ ဒီအချက်ကို ကျမတို့ မလိုလားပါဘူး၊ ဒီ အမျိုးသမီးအနေနဲ့ ရွေး ကောက်ပွဲမှာ ကျမတို့ ပါဝင်သင့်‌တယ်လို့ ဘာကြောင့် ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာ မသိပေမဲ့ ကျမတို့အနေနဲ့ ဒီအခြေအနေ တွေအောက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
SUE LAWLEY- မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် အချိန်အတော်ကြာအောင် လှုပ်ရှားဆောင် ရွက်နေတဲ့ မင်းသမီးတဦးဖြစ်တဲ့ Maureen Lipman ကို ဖိတ်ခေါ်‌ပါတယ်။
Maureen Lipman … ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စကားပြောခွင့်ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ထိန်းသိမ်း ခံရတဲ့ နှစ်များအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှု သို့မဟုတ် ပျော်ရွှင်မှု ဖြစ်ခဲ့ပါသလား။
အောင်ဆန်းစုကြည် … တကယ့်ကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့ပါတယ်။ ကျမက ပျော်ရွှင်ရယ်မောရတာကို အမြဲတမ်း နှစ်သက်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ အမေပြောခဲ့တဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများကလည်း ကျမအပေါ် တော်တော်လွှမ်း မိုးမှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျမအမေရဲ့ ဘဝမှာ ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ် ဇာတ်လမ်းတွေ ရှိခဲ့တာကြောင့် အဆွေးရုပ်‌ရှင်တွေကို ဘယ်တော့မှ မကြည့်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျမလည်း အဆွေး ရုပ်ရှင်တွေကို ဘယ်တော့မှ မကြိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရှိတ်စပီးယားရဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ် ဇာတ်လမ်းတချို့ကိုတော့ ကျမ ကြိုက်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးရမယ့် ဇာတ် လမ်းတွေကိုတော့ အမြဲတမ်းကြိုက်ပါတယ်။
Maureen Lipman – ကျမကို ဒုတိယမေးခွန်း မေးခွင့်မပြုထားပါဘူး။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း အရေးအခင်းကို လူတွေ သတိထားမိသလို မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုလည်း ကမ္ဘာက သိရှိအောင်လုပ်ဖို့ အလွန်ပဲ ခက်ခဲပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်အကြောင်းကို အနည်းငယ် ပြောကြားစေလိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ပညာရေးလက် လှမ်းမီဖို့ ဘယ်လောက် ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ ပြောကြားပေးစေလိုပါတယ်။
SUE LAWLEY- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်။
အောင်ဆန်းစုကြည် … မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပညာပေးဖို့ ကြိုးစားသင်ယူနေ ရတယ်လို့ ထင်ပါ တယ်။ ဒီအခြေအနေအရ အလွန်ဘဲ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေကို မိမိကိုယ်မိမိ ပညာပေးသင်ကြား နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်လို့ မရပါဘူး။ အရွယ်ရောက်လာပြီး မိမိကိုယ်မိမိ ပညာပေးနိုင်သည့်အထိ စောင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ တို့အနေနဲ့ တကယ့်ကို အခြေခံကနေစဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အရင်းအမြစ်အားလုံးကနေ အကူ အညီတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ NLD နှင့် Democracy Network အနေနဲ့ အခမဲ့ပညာသင်ကျောင်းတွေ စတင်တည် ထောင်နေပြီး အောင်မြင်လျက် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကူအညီပေါင်းစုံလည်း လိုအပ်နေပါတယ်။
SUE LAWLEY … ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုက အလွန်ပဲ လေးနက်တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ ဟောပြော သွားတာ ကြားရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အန္တရာယ်တွေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ လှုပ်ရှားမှုမှာ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ နားထင် ကို စစ်သားတွေက ရိုင်ဖယ်နဲ့ ထောက်ထားပြီး ကွန်မန်ဒါက ပစ်ခတ်ဖို့ အချက်ပေးရေတွက်နေတဲ့ အလေ့အထမျိုး ရင် ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဖခင်လိုပဲ မိမိရဲ့ ခံယူချက်နဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ကို စွန့် လွှတ်မယ့် အနေအထားမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။
အောင်ဆန်းစုကြည် … ကျမတို့ အားလုံးအနေနဲ့ ဒီလိုအနေအထားမျိုးကို အစောကြီးကတည်းက ကြုံတွေ့ ပြီးသားဖြစ် ပါတယ်။
SUE LAWLEY- တစုံတရာပြောင်းလဲမှုများ မရှိဘူးလား။ ဖြစ်နိုင်ချေ တခုခုပေါ့။
အောင်ဆန်းစုကြည် … ဖြစ်နိုင်ချဆေိုတာ အမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ ဘတ်စ်ကား တိုက်ခံရတဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေမျိုး လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
SUE LAWLEY- Kieran Prendergast အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ်အပေါ် ဘယ်လို ထင်မြင်ပါသလဲ။ အခန်းထဲမှာ ဆင်ရောက်နေသလိုမျိုး အလွန်ခက်ခဲတဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ဖြစ်ထွန်းလာမယ့် အလားအလာများ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ ပြောကြားပေးစေလိုပါတယ်။
Sir Kieran Prendergast … မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရ အခက်အခဲဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာ တခုအပါအဝင် ဖြစ် ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကာလကြာရှည်စွာ တံခါးပိတ်ဝါဒ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်း၊ တဦးတည်းသီးသန့် နေထိုင် မှုတို့ကြောင့် အပြင်ထက်စာရင် အတွင်းပိုင်းမှာသာ ပြောင်းလဲမှု ပိုမို ဖြစ်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ရပါတယ်။
SUE LAWLEY… ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်မှာ ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးဆောင်ရ မယ်လို့ ထင်ပါသလား။
အောင်ဆန်းစုကြည် … အများကြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ကာလအတွင်း Tim ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ် တအုပ်ထဲမှာ အရှေ့ဂျာမနီမှာ အချိန် တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ ရေးသားခဲ့ တာကို ပြန်သတိပေး ချင်ပါတယ်။
Timothy Garton Ash – နေပါဦး၊ နေပါဦး၊
အောင်ဆန်းစုကြည် … (ရယ်လျက်) ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေလဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တူနီးရှားနဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံ တို့မှာ ညတွင်းချင်း ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ချေရှိသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ယမန်နှစ်က မေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင် မယ်လို့ ‌ဖြေမယ့်သူ ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလာပြောနေတာလဲလို့တောင် ပြန်ပြောနိုင်တဲ့ အနေအထားပါ။
SUE LAWLEY- Timothy Garton Ash အနေနဲ့ အရှေ့ဥရောပ သဘောထားကွဲလွဲမှုကို လေ့လာခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးပေးပါဦး။ မိမိတို့ခံယူချက်အတွက် လွတ်လပ်ခွင့်သာမက အသက်ကိုပါ စွန့်လွှတ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထား သူတွေအတွက် ဒီလိုအရာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ ဘယ်နေရာက သတ္တိတွေရလာလဲဆိုတာ ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်။
Timothy Garton Ash … ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူရဲကောင်းအမျိုးသမီးတဦး ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော် ပြောရဲပါ တယ်။ အာဏာရှင်စနစ်တခုရဲ့ ကျေးကျွန်တွေ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်သူတွေ ဘာကြောင့် ဖြစ်လာရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ကျနော် စဉ်းစားနေတာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက်ရှိပါပြီ။ သတ္တိရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်ဖို့ထက် သူရဲဘောကြောင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ဖို့က အများကြီး ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားချက်ထဲက သူမရဲ့ အတိုက်အ ခံ လူထုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာသားတခုကို ပြန်လည်ပြောကြားလိုပါတယ်။
“အတိုက်အခံ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ၎င်းတို့ တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ရာတွင် ကြောက်စိတ် မရှိ ဟန်ဆောင်နေကြရပြီး ၎င်း တို့၏ ရဲဘော်ရဲဘက်များ ယင်းသို့ ဟန်ဆောင် နေသည်ကိုလည်း မမြင်ဟန်ဆောင်နေ ကြရသည်။”
ဒီစကားရပ်ဟာဆိုလျှင် အတိုက်အခံတွေအပေါ် ထိုးထွင်း သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စကားရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ နေအိမ်အကျယ် ချုပ်က လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါ ကြောက်စိတ်က ပိုများလာသလား၊ ပိုနည်းသွားသလား။ ကြောက်စိတ်ကို ကျော်လွှား နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလား။
အောင်ဆန်းစုကြည် … ဟုတ်ကဲ့၊ ကြောက်စိတ်က ပိုနည်းသွားတယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဆက်သွားနေ ရသလဲဆိုရင် ဘယ်လိုရပ်တန့်ရမယ်ဆိုတာ မသိလို့ပါ။ (ပရိသတ်ရယ်သံ) ကျမတို့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေအပေါ် ဘယ် လိုနောက်ပြန်လှည့်ရမယ် ဆိုတာ မသိပါဘူး။ ကျမတို့ရဲ့ ရဲဘော် ရဲဘက်တွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ဘယ်လိုစွန့် ပစ်ထားခဲ့ရမယ်ဆိုတာလည်း မသိပါဘူး၊ ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေ မလုပ်နိုင်လို့ ကျမတို့ရဲ့လမ်းကို ဆက်လျှောက်နေတာပါ။
SUE LAWLEY- ဒီနေရာမှာပဲ ကျမတို့ရဲ့ အစီအစဉ်ကို ရပ်နား ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တပတ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် အနေနဲ့ သူမရဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ဆန့်ကျင်နေတဲ့ အင်အားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပြောကြားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ Vaclav Havel က NLD ပါတီကို “အာဏာမဲ့ လူတန်းစားတို့၏ အာဏာ” တင်စားခဲ့ဖူးပါတယ်။ လန်ဒန်မြို့ ၊ Radio Theatre ကို လာရောက်ကြတဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ပရိသတ်များကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ ဟော ပြောပို့ချသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ http://www.naytthit.net မှ တဆင့် ကူယူ မျှဝေပါသည်။
Posted by နော်မန် at 3:13 AM
မြန်မာနိုင်ငံဟာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံတခု ဖြစ်တာကြောင့် မိမိတို့အားလုံး တညီတညွတ်တည်း ရှိစေဖို့ လူ့အခွင့်အရေးဟာ ကြီးမားတဲ့ ညီညွတ်ရေး အကြောင်းတရားတခု ဖြစ်ပါတယ်လို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီမိုကရေစီဟာ တဦးတယောက် တဖွဲ့ တပါတီထဲကို အကျိုးရှိစေတာ မဟုတ်ဘဲ စစ်ဘက် အရပ်ဘက် အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိတဲ့စနစ် ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီးလ်နပ်စ်မြို့တော်မှာ ကျင်းပမယ့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ အသိုက်အ၀န်းရဲ့ ၀န်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးကို ဗွီဒီယိုနဲ့ ပေးပို့တဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဲဒီလို ပြောထားတာပါ။ အပြည့်အစုံကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အခု ၀န်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးကို ၂၀၀၉-၂၀၁၁ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံက လက်ခံကျင်းပတာဖြစ်ပြီး နောက် အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌကတော့ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by နော်မန် at 3:06 AM
ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်တဲ့​ကိစ္စက အ​ပေး​အယူအဖြစ်နဲ့ အများ​ကြီး​လျှော့​ပေါ့​ပေး​နိုင်တယ်
မနက်ဖြန် မြန်မာနိုင်ငံကို လာ​ရောက်မယ့်​ ဩစ​တြေး​လျနိုင်ငံခြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ ကယ်ဗင်ရတ် (Kevin Rudd) ရဲ့ခရီး​စဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့​ ဆစ်ဒနီ အ​ခြေစိုက် ဘား​မား​ကမ်ပိန်း​ ဩစ​တြေး​လျ (Burma Campaign Australia) ရဲ့​ ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​ ​ဒေါက်တာမြင့်​ချိုကို ဆက်သွယ်​မေး​မြန်း​ထား​ပါတယ်။
ဩစ ​တြေး​လျက အရင်တုန်း​ကလည်း​ အမျိုး​သား​ပြန်လည်သင့်​မြတ်​ရေး​ဆိုပြီး​တော့​မှ ​ပြောတဲ့​အတိုင်း​ပဲ ဒီ ခရီး​စဉ်မှာလည်း​ပဲ အမျိုး​သား​ပြန်လည်သင့်​မြတ်​ရေး​အတွက် ​ပြောမယ်ဆိုပြီး​တော့​မှ ​ကြေညာချက်မှာ​တော့​ ကျ​နော်တို့ ​တွေ့တာ​ပေါ့​ဆရာ။ Burma Campaign Australia အ​နေနဲ့ ကျ​တော့​ ထိ​ရောက်မှုက ဘယ်​လောက် ရှိနိုင်တယ်လို့​ ဆရာတို့ ယူဆလဲ။
“နံပါတ် ၁ အချက်က သွား​တဲ့​ ဩစ​တြေး​လျဝန်ကြီး​ ကိုယ်၌ကိုက မြန်မာပြည် ဒီမိုက​ရေစီအ​ပြောင်း​အလဲ ဖြစ်​ပေါ်​ရေး​မှာ တကယ့်​ကို အင်တိုက်အား​တိုက် ​ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့​ ဆန္ဒရှိတယ်။ အရင်တုန်း​ကလည်း​ အတိုက်အခံ ဘဝမှာ​ကော၊​ ဝန်ကြီး​ချုပ်ဘဝမှာ​ကော၊​ လက်ရှိ နိုင်ငံခြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ ဘဝမှာ​ကော တက်တက်ကြွကြွ လုပ်​ဆောင်​ပေး​နေတဲ့​အတွက်​ကြောင့်​ သူ့​ရဲ့​ အင်တိုက်အား​တိုက် လုပ်​ဆောင်မှုက​တော့​ တစုံတရာ အကျိုး​သက်​ရောက်မှု ရှိမယ်လို့​ ကျ​နော် ယူဆတယ်။ ​နောက်တချက်ကလည်း​ သွား​တဲ့​အခါမှာ ဖိအား​ပဲ ​ပေး​မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကူညီနိုင်မယ့်​ ကိစ္စ​တွေကိုလည်း​ အများ​ကြီး​ ချပြပြီး​တော့​ ကူညီလက်စနဲ့ တဖက်က အ​ပြောင်း​အလဲ လုပ်​ပေး​မယ့််​ ကိစ္စ​တွေကို အ​ပေး​အယူ လုပ်ပြီး​တော့​ ​ဆွေး​နွေး​လိမ့်​မယ်လို့ ကျ​နော် ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
ဟုတ်ကဲ့​ ဘယ်လိုမျိုး​ ကိစ္စမျိုး​တွေလဲ ဆရာ။
“ဥပမာ ဩစ​တြေး​လျက​နေ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့​ ဒီ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​တွေနဲ့​ သူတို့​ရဲ့​ မိသား​စု​တွေနဲ့ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်​ဖော်ကိုင်ဖက် အ​ပေါင်း​အပါ ၄၆၃ ဦး​ကို ဘဏ္ဍာ​ရေး​အရ ပစ်မှတ်ထား​ပြီး​တော့​ ပိတ်ဆို့ထား​တဲ့​ ကိစ္စ​တွေ၊​ ဩစ​တြေး​လျကို လာလို့ မရ​အောင် ဗီဇာပိတ်ပင်တဲ့​ ကိစ္စ​တွေ၊​ မြန်မာနိုင်ငံကို တင်သွင်း​နေတဲ့​ ကာကွယ်​ရေး​ပစ္စည်း​တွေ မ​ရောင်း​ချရ​အောင် ပိတ်ပင်ထား​တဲ့​ ကိစ္စ​တွေ ဒီ ဆန်ရှင်ကိစ္စ​တွေဟာ လက်ရှိ နအဖ စစ်အုပ်စု​ကော၊​ လက်ရှိ ကြံ့​ဖွံ့​အစိုး​ရ​ကော မလိုချင်ဆုံး​အရာပဲ။ အဲဒီအ​ပေါ်မှာ ဩစ​တြေး​လျအစိုး​ရကို ဆန်ရှင်ပိတ်ဆို့​ဒဏ်ခတ်မှု ရုပ်သ်ိမ်း​ဖို့​ ​ပြောမှာပဲ။ အဲဒီ​တော့​ ဩစ​တြေး​လျအစိုး​ရ အ​နေနဲ့​ကလည်း​ ဒါ​တွေ ချမှတ်ထား​တာက ဗမာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​တွေ လွတ်​မြောက်ဖို့​အတွက်၊​ ​နောက်ပြီး​တော့​ အမျိုး​သား​ ပြန်လည်သင့်​မြတ်​ရေး​အတွက် ​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​ရေး​တွေ ဖြစ်​ပေါ်လာ​အောင်၊​ တိ်ုင်း​ရင်း​သား​လူမျိုး​စု​တွေကို လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​ချိုး​ဖောက်​နေတဲ့​ ကိစ္စ​တွေ ရပ်သွား​အောင် ဆိုပြီး​တော့​ သူတို့​ ဆန်ရှင်ပိတ်ဆို့​မှုကို ​တောင်း​ဆိုထား​တာဖြစ်တယ်။ အဲဒီ​တော့​ ဒါ​တွေကို သူတို့​က ပြန်ပြီး​တော့​ ​ပြောမယ်ဆိုရင်​တော့​ ဒီပိတ်ဆို့​ဒဏ်ခတ်တဲ့​ ကိစ္စ​တွေနဲ့​ပဲ အ​ပေး​အယူအဖြစ်နဲ့​ အများ​ကြီး​လျှော့​ပေါ့​ စဉ်း​စား​ပေး​နိုင်တယ်လို့​ ကျ​နော်ယူဆပါတယ်။”
နောက်တချက်က နိုင်ငံခြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ တ​ယောက် ကိုယ်တိုင်က မသွား​တာ ကြာပြီ​ပေါ့​လေ။ အခုသွား​တယ်ဆိုတဲ့​ဟာက ဒါက ဘယ်​လောက်ထူး​ခြား​တဲ့​ ခရီး​စဉ်လို့​ ​ပြောလို့​ရလဲ။ ဆိုလိုတာက နိုင်ငံခြား​ရေး​ပေါ်လစီက ဗမာပြည်နဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​တော့​မှ အကြီး​အကျယ် ​ပြောင်း​လဲသွား​တဲ့​ဟာမျိုး​ ဖြစ်သွား​ပြီလား​ ဒီနှစ်​တွေထဲမှာ။
“ဒီ ​လေဘာအစိုး​ရ တက်လာပြီး​ ​နောက်ပိ်ုင်း​မှာ​တော့​ အရင်အစိုး​ရထက် စာရင်​တော့​ အ​ပြောင်း​အလဲ​တွေ ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း​ ဩစ​တြေး​လျ နိုင်ငံ​ရေး​မှာ ဘယ်ပါတီပဲ အစိုး​ရဖြစ်ဖြစ် သူတို့​ရဲ့ နိုင်ငံခြား​ရေး​မှုဝါဒက မြန်မာပြည်အ​ပေါ်မှာ ထား​ရှိတာ အတူတူပါပဲ။ တစ်အချက်က​တော့​ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​နဲ့​ ဒီမိုက​ရေစီ ထွန်း​ကား​လာ​အောင်၊​ ​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​ရေး​နဲ့ အမျိုး​သား​ပြန်လည်သင့်​မြတ်​ရေး​ ဖြစ်​ပေါ်လာ​အောင်ဆိုတဲ့​ ရည်ရွယ်ချက်က ဘယ်အစိုး​ရတက်တက် တူတူပါပဲ။ ​နောက်တချက်က ဩစ​တြေး​လျမှာရှိတဲ့​ မြန်မာနိုင်ငံသား​ နှစ်​သောင်း​လောက်ရဲ့​ တိုက်တွန်း​နှိုး​ဆော်ချက်​တွေကလည်း​ ဩစ​တြေး​လျအစိုး​ရက​နေ ဂရုစိုက်ရမယ့်​ အချက်​တွေ ဖြစ်တယ်။ ဒီ နှစ်ချက်အ​ပေါ်မှာ အ​ခြေခံပြီး​တော့​ ဩစ​တြေး​လျအစိုး​ရတိုင်း​ အစိုး​ရတိုင်း​ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​တော့​ နိုင်ငံခြား​ရေး​မူဝါဒ ချမှတ်တဲ့​အခါမှာ အမြဲတမ်း​လိုလိုပဲ ဆင်တူယိုး​မှား​ ရှိပတယ်။ တခုပဲ ရှိတာက စီး​ပွား​ရေး​နဲ့​ ပတ်သက်လာရင်​တော့​ အရင်အစိုး​ရက​တော့​ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ဖို့​အတွက် ပိုဆန္ဒများ​တယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ လက်ရှိအစိုး​ရက​တော့​ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ပါလို့​လည်း​ မတိုက်တွန်း​ဘူး​၊​ မလုပ်ပါနဲ့​လို့​လည်း​ မပိတ်ပင်ဘူး​။ တဖက်က​နေ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ရင်​တော့​ ဥပ​ဒေ​တွေက စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ငန်း​တွေ အာမခံချက် မရှိဘူး​၊​ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ငန်း​တွေက အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ဒါ​ကြောင့်​မို့​လို့​ သွား​ချင်တဲ့​ ကုမ္ပဏီ၊​ လုပ်ချင်တဲ့​ ကုမ္ပဏီ​တွေက ကိုယ့်​ဟာကိုယ် ဆုံး​ဖြတ်ပါဆိုပြီး​ အန္တရာယ်​တွေကို​တော့​ ကြိုတင်​ပြောပြတဲ့​အဆင့်​ကို​တော့​ သူတို့​ သတိ​ပေး​ပါတယ်။ ဆို​တော့​ အခု သွား​တဲ့​ ကိစ္စက​တော့​ မြန်မာနိုင်ငံ​ရေး​ကို တကယ်ပဲ နိုင်ငံခြား​ရေး​ဝန်း​ကြီး​ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွား​ရောက် စကား​ပြောပြီး​ တိုက်တွန်း​နှိုး​ဆော်မယ်ဆို​တော့​ ဒါက ထူး​ခြား​လေး​နက်တဲ့​ ခရီး​စဉ်လို့​ ကျ​နော်တို့​ မြင်ပါတယ်။ ​နောက်တချက်က ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ကိုလည်း​ ​တွေ့​ပြီး​တော့​ စကား​ပြောမယ့်​ ကိစ္စ​တွေ ရှိလာတဲ့​အခါကျ​တော့​ ဘာ​ပြော​ပြော က​နေ့​ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်​နေတဲ့​ လွှတ်​တော်နိုင်ငံ​ရေး​ ပြင်ပမှာရှိတဲ့​ အထင်ကရ နိုင်ငံ​ရေး​အင်အား​စု​တွေ အကုန်လုံး​ကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့​ ပုံစံမျိုး​နဲ့​ တလေး​ တစား​ ဆက်ဆံတဲ့​ ကိစ္စမို့လို့​ ဒါကလည်း​ အ​ရေး​ကြီး​တဲ့​ ခရီး​စဉ်လို့ ကျ​နော်တို့ သုံး​သပ်ပါတယ်။”
Burma Campaign Australia က​ကော ဒီခရီး​စဉ်မတိုင်ခင်မှာ သူ့​ကို သတင်း​စကား​ ပါး​လိုက်တာမျိုး​၊​ တိုက်တွန်း​လိုက်တာမျိုး​ လုပ်ခွင့်​ရခဲ့​ပါသလား​။
“ဟုတ်ကဲ့​ ကျ​နော်တို့ ​မေလ ၁၂ ရက်​နေ့​တုန်း​က နိုင်ငံခြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ ကင်ဗင်ရတ်နဲ့​ ကျ​နော်တို့​ ဖယ်ဒရယ်ပါလီမန်ထဲမှာ တိုက်ရိုက် မျက်နှာချင်း​ဆိုင် ​တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ပါတယ်။ အဲဒီတုန်း​က​တော့​ ကျ​နော်တို့ နယ်စပ်ဖြတ်​ကျော်ပြီး​တော့​ မြန်မာပြည်က တိုင်း​ရင်း​သား​လူမျိုး​စု​တွေကို အကူအညီ​ပေး​ဖို့ ဆိုတဲ့​ ကိစ္စ​တွေကို အဓိက ထား​ပြီး​တော့​ ကျ​နော်တို့ ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း​ပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုက​ရေစီရရှိ​ရေး​၊​ ​တွေ့ဆုံ​ဆွေး​နွေး​ပြီး​တော့​ အမျိုး​သား​ပြန်လည်သင့်​မြတ်​ရေး​၊​ လူ့အခွင့်​အ​ရေး​တွေကို ​လေး​စား​လိုက်နာ​ရေး​၊​ နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​ လွတ်​မြောက်​ရေး​တွေ အကုန်လုံး​ကို ကျ​နော်တို့ ​သေချာ​ဆွေး​နွေး​ပြီး​တော့​ ဒါ​တွေကို ရ​အောင် ဆက်ပြီး​တော့​ ကြိုးစား​ပေး​ပါလို့ ကျ​နော်တို့​ သူ့ကို တိုက်တွန်း​ခဲ့​ပါတယ်။”
Posted by နော်မန် at 1:16 AM
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီဟာ တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီတခု မဟုတ်တော့တာကြောင့် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ရပ်ဖို့ မြန်မာအစိုးရသစ်က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို သတိပေးချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ NLD က သူတို့ပါတီဟာ တရားဥပဒေနဲ့အညီ ရပ်တည်နေတဲ့ပါတီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီသတိပေးချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံလိုတယ်လို့ တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုကျော်ထင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုထံ လိပ်မူပြီး ဒီကနေ့ ပေးပို့တဲ့ NLD ရဲ့ အကြောင်းပြန်စာမှာ NLD ဟာ စစ်အစိုးရဟောင်းတွေ ချမှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့အညီ တရားဝင်ပါတီတခု အနေနဲ့ ရပ်တည်နေကြောင်း ပါရှိပါတယ်။
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာလမှာ NLD ဘက်က သီးခြားသက်သာခွင့် အက်ဥပဒေအရ ပါတီဖျက်သိမ်းတာ တရားမ၀င်ကြောင်း တရားရုံးချုပ်သို့ လျှောက်လဲခဲ့ပေမဲ့ ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ပါတီ ဆက်လက် ရပ်တည်ရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို တိုင်ကြားထားတာကိုလည်း ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ဆဲလို့ ဦးအုံးကြိုင်က ဆက်ပြောပါတယ်။
“အခုဆို စာနဲ့ပေနဲ့ ဦးအောင်ရွှေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကြောင်းကြားလာတယ် ဆိုတော့ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအရ ဆိုရင်လည်း NLD အနေနဲ့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ ရှေ့ဆက်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက်၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဒါဟာ မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာ တခုပဲလို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။”
အရင်စစ်အစိုးရဟောင်းဟာ NLD ပါတီဝင်တွေကို နှုတ်ထွက်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ အနှောင့်အယှက် ပေးတာတွေ၊ ဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရဟောင်းဟာ ၁၉၉၇-၉၈ လောက်ကစပြီး တပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ NLD ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ဖြုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၃ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်း အပြီးမှာ NLD ဗဟိုနဲ့ တိုင်းရုံးတွေမှအပ နယ်ရုံးတွေရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ဖြုတ်ချခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှ နယ်မြို့တချို့မှာ ဆိုင်းဘုတ်ပြန်တင်လာပါတယ်။
အခုလို NLD ကို သတိပေးလာတာဟာ နောက်လထဲမှာ စတင်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နည်လှည့်ခရီးစဉ် မတိုင်ခင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်တွေထဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း နိုင်ငံတကာက စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေကြပါတယ်။